3001s &quot;Ukholo olujongana nobunzima&quot; kunye noMfundisi uRick Warren images and subtitles
- Molweni, nonke, ndinguRick Warren, Umfundisi kwiCawa yaseSaddleback nombhali of "Iinjongo eziBanzi ziBomi" kunye nesithethi kwinkqubo "yeThemba lemihla ngemihla". Enkosi ngokusebenza kolu sasazo. Uyazi, kule veki apha e-Orange County, eCalifornia, urhulumente wabhengeza ukuba bayavala Zonke iintlanganiso zalo naluphi na uhlobo, zalo naluphi na ubungakanani kude kube sekupheleni kwenyanga. Wamkelekile kwiCawa yaseSaddleback ekhayeni. Ndiyavuya ulapha. Kwaye ndiza kukufundisa ngevidiyo phakathi ngoku nangaliphi na ixesha le ngxaki ye-COVID-19 iphela. Wamkelekile kwiCawa yaseSaddleback ekhayeni. Kwaye ndifuna ukumema rhoqo ngeveki, yinxalenye yeenkonzo zonqulo kunye. Siza kuba nomculo kwaye sinqule kunye, kwaye ndiza kube ndikhupha ilizwi elivela eLizwini likaThixo. Uyazi, njengoko bendicinga ngale nto, ngendlela, kuqala kufuneka ndixelele. Ndicinge ukuba bazakusirhoxisa ukuba sihlangane. Kwaye ke kule veki, ndandinesitudiyo saseSaddleback ndathutha ndaya kwigaraji yam. Nditsho ndicofa oku kwigaraji yam. Iqela lam lobuchwephesha lobuchwephesha. Ngena, bafo, yithi into kubo bonke. (ehleka) Bancede ukuyihambisa apha kwaye bayimisa yonke ukuze sikwazi ukuthetha nawe ngeempelaveki. Ngoku, njengoko bendicinga ngento ekufuneka siyigubungele Ngeli xesha le COVID-19 inengxaki, Ndakhawuleza ndacinga ngencwadi kaJames. Incwadi kaJames yincwadi encinci kakhulu kufutshane nesiphelo seTestamente eNtsha. Kodwa iluncedo kwaye iluncedo kakhulu, le ncwadi ndiyibiza ngokuba lukholo olusebenza xa ubomi bungasebenzi. Kwaye ndacinga ukuba ikhona into efunekayo ngoku, Ngaba sidinga ukholo olusebenzayo xa ubomi bungasebenzi. Kuba ayisebenzi kakuhle ngoku. Ke namhlanje, kule veki, siza kuqala uhambo kunye esiya kukukhuthaza ngale ngxaki. Kwaye andifuni ukuba uphoswe nayiphina imiyalezo. Kuba incwadi kaJakobe ngokwenyani igubungela ezili-14 eziphambili Iibhloko zokwakha zobomi, 14 imiba ephambili yobomi, Iindawo ezili-14 umntu ngamnye kuni Sele ukujongana nayo ebomini bakho, kwaye uza kujongana nako kwixesha elizayo. Umzekelo, kwisahluko sokuqala sikaJames, mandikunike umfanekiso nje omncinci wale ncwadi. Yizahluko ezine kuphela. Isahluko sokuqala, sithetha kuqala malunga nobunzima. Kwaye siza kuthetha ngaloo nto namhlanje. Yintoni injongo kaThixo ngeengxaki zakho? Ke iyathetha ngokhetho. Uyenza njani ingqondo yakho? Wazi njani ukuba uhlala nini, uza kuhamba nini? Uyazi ukuba wenze ntoni, usenza njani izigqibo? Kwaye ke iyathetha malunga nesilingo. Kwaye siza kujonga ukuba uzahlula njani izilingo eziqhelekileyo ebomini bakho ebonakala iqhubeka ikwenza usilele. Kwaye ke iyathetha ngesikhokelo. Kwaye iyathetha malunga nokuba singasikelelwa njani ngebhayibhile. Musa ukuyifunda nje, kodwa usikelelwe ngayo. Yiyo yonke kwisahluko sokuqala. Kwaye siya kujonga kwezo kwiiveki ezizayo. Isahluko sesibini sithetha malunga nobudlelwane. Siza kujonga ukuba ubaphatha njani na abantu ngokufanelekileyo. Kwaye nabantu kufuneka bahlale ekhaya, bonke basekhaya kunye, abantwana kunye nomama nootata, kwaye abantu baya kuba kwiikhathaza zabanye. Iya kuba ngumyalezo obalulekileyo kubudlelwane. Ke iyathetha ngokholo. Umthemba njani ngokwenene uThixo xa ungaziva unje? kwaye xa izinto zihamba ngendlela engalunganga? Yiyo yonke kwisahluko sesibini. Isahluko sesithathu, siza kuthetha malunga neengxoxo. Amandla encoko. Le yeyona ndinyana ibalulekileyo Ebhayibhileni, uwulawula njani umlomo wakho? Yinto ebalulekileyo nokuba sikuloo ngxaki okanye hayi. Kwaye ke iyathetha malunga nobuhlobo. Kwaye isinika ulwazi olusebenzayo kwindlela yokwakha ubuhlobo obu bulumko kwaye uphephe abahlobo abangalunganga. Esi sahluko sesithathu. Isahluko sesine siyingxabano. Kwaye kwisahluko sesine, sithetha ngayo uziphepha njani iimpikiswano Kwaye oko kunokuba luncedo ngokwenyani. Njengoko kusiya kukhula imbandezelo kunye nokudandatheka, njengoko abantu bephelelwe ngumsebenzi, uziphepha njani iimpikiswano? Kwaye ke iyathetha ngokugweba abanye. Uyeka njani ukudlala uThixo? Oko kungadala uxolo oluninzi ebomini bethu ukuba singayenza loo nto. Kwaye ke iyathetha ngekamva. Ucwangcisa njani kwikamva? Yiyo yonke kwisahluko sesine. Ngoku, kwisahluko sokugqibela, isahluko sesihlanu, bendinixelele Kwakukho izahluko ezine, zikhona ngokwenene izahluko ezihlanu kuYakobi. Siza kuthetha ngemali. Kwaye iyathetha malunga nokuba nobulumko kanjani ngobutyebi bakho. Kwaye siya kujonga unyamezelo. Wenza ntoni xa ulinde kuThixo? Elona gumbi linzima ukuhlala kulo kwigumbi lokulinda xa ungxamile kwaye ungabi nguThixo. Kwaye emva koko siya kujonga umthandazo, ngowuphi umyalezo wokugqibela esiza kuwujonga. Uthandaza njani ngeengxaki zakho? Ibhayibhile ithi kukho indlela yokuthandaza kunye nokufumana iimpendulo, kwaye kukho indlela yokungathandazi. Kwaye siza kujonga kuloo nto. Ngoku namhlanje, siza kujonga iivesi ezintandathu zokuqala kwincwadi kaJames. Ukuba awunayo iBhayibhile, ngoko ndifuna ukuba uyikhuphele Kule webhusayithi kuboniswe amanqaku, amanqaku okufundisa, kuba zonke iivesi esiya kujonga kuzo zikhona kulwandlalo lwakho. Isahluko sokuqala, iivesi ezintandathu zokuqala. Kwaye iBhayibhile iyithetha le nto xa ithetha ngayo ukujongana neengxaki zakho. Okokuqala, uYakobi 1: 1 uthi. UYakobi, umkhonzi kaThixo neNkosi uYesu Krestu, kwizizwe ezili-12 ezisasazekileyo phakathi kweentlanga, imibuliso. Ngoku, ndiyeke kancinci umzuzu apha Olu lolona lwaziso lubhekisa phambili nayiphi na incwadi esebhayibhileni. Kuba uyazi ukuba wayengubani uJames? Wayengumntakwabo-Yesu. Uthetha ukuthini ngalo nto? Kuthetha ukuba wayenguMariya nonyana kaJosefu. UYesu wayengunyana kaMariya kuphela. Wayengengonyana kaJosefu kuba uThixo wayenguyise kaYesu. Kodwa iBhayibhile isixelela ukuba uMariya noYosefu saba nabantwana abaninzi kamva, kwaye basinike namagama abo. UJames wayengengomKristu. Wayengenguye umlandeli kaKristu. Wayengakholelwa ukuba umntakwabo-Yesu wayenguMesiya ngexesha lobukumkani bukaYesu. Wayengakholelwa. Kwaye uyakufumanisa ukuba, mzalwana omncinci akakholelwa kumzalwana omdala, ke, oko kuyacaca. Yintoni eyamenza uYakobi wakholwa kuYesu Krestu? Uvuko. Xa uYesu ebuyile ekufeni kwaye wajikeleza Ziintsuku ezingama-40 uYakobi wambona. waba likholwa laza kamva laba yinkokeli kwiCawa yaseYerusalem. Ke ukuba umntu unelungelo lokuphosa amagama, ngumntu lo. Wayengathi, James, mfo wakhula kunye noYesu. UYakobi, umntakwabo-Yesu. UJames, umhlobo osenyongweni kaYesu ukhula. Olo hlobo lwezinto, kodwa alwenzi. Utsho nje uYakobi, umkhonzi kaThixo. Akasitshiyi isikhundla, akakhuthazi ubungqangi bakhe. Kodwa kwivesi yesibini, uqalisa ukungena le yokuqala ukukhupha injongo kaThixo kwiingxaki zakho. Makhe ndikufundele. Utsho, xa zonke iintlobo zezilingo Isihlwele ebomini bakho, musa ukubacaphukela njengabangeneleli, kodwa babamkele njengabahlobo. Baqonde ukuba beza kuvavanya ukholo lwakho, kunye nokuvelisa ngaphakathi kuwe umgangatho wonyamezelo. Kodwa ke loo nkqubo iqhubeke de kube lonyamezelo Uphuhliswe ngokupheleleyo, kwaye uya kuba ngumntu Umlinganiswa okhulileyo kunye nokugcina ngaphandle kwamabala obuthathaka. Yiyo inguqulelo yePhillips kwisahluko sokuqala skaYakobi, iivesi ezimbini ukuya kwesithandathu. Ngoku, uthi xa zonke iintlobo zezilingo zingena ebomini bakho Kwaye baninzi ebomini bakho, uthe, musa ukubacaphukisa njengabangeneleli, bamkeleni njengabahlobo. Uthi, uneengxaki, wonwabe. Unengxaki, vuya. Unengxaki, tshomi. Ngoku, ndiyazi ukuba ucinga ntoni. Uyahamba, uyandiqhatha? Kutheni le nto kufanele ukuba ndonwabe malunga ne-COVID-19? Kutheni le nto kufanele ukuba ndizamkele ezi zilingo ebomini bam? Inokwenzeka njani loo nto? Isitshixo kule meko yonke yokuzigcina isimo sengqondo esifanelekileyo embindini wentlekele ligama eli qaphela, ligama eliqondayo. Watsho, xa zonke ezi ntlobo zovavanyo Isihlwele ebomini bakho, musa ukubacaphukela njengabangeneleli, kodwa bamkele njengabahlobo, kwaye uqonde, qaphela, beza kuvavanya ukholo lwakho. Kwaye ke uyaqhubeka, into aya kuyivelisa ebomini babo. Into ayithethayo apha kukuba yimpumelelo ekuphatheni iiveki ezingaphambi kwethu kolu bhubhani lwe-COVID-19 kungoku nje kwihlabathi liphela, kwaye nangakumbi nangaphezulu Iintlanga ziyavala, kwaye zivalekile Iivenkile zokutyela zivale ivenkile, bayazivala izikolo, kwaye bavala iicawe, kwaye bavala nayiphi na indawo apho abantu babuthelana khona, kwaye njengalapha e-Orange County, apho singavumelekanga ukuba sidibane nabani na kule nyanga. Utsho, impumelelo yakho ekusombululeni ezi ngxaki Iya kuqonda ngokuqonda kwakho. Ngokuqonda kwakho. Kwaye ngesimo sakho sengqondo malunga nezo ngxaki. Yinto oyaziyo, yile uyaziyo. Ngoku, into yokuqala kule ndima ndifuna ukuba uyiqonde Ngaba uThixo usinika izikhumbuzo ezine malunga neengxaki. Unokufuna ukuyibhala phantsi. Izikhumbuzo ezine ngeengxaki ebomini bakho, ezibandakanya ingxaki esikuyo ngoku. Inani lokuqala, uthi kuqala, iingxaki azinakugwenywa. Iingxaki zinqabile. Ngoku, uyithetha njani loo nto? Utsho, xa zonke iintlobo zezilingo zisiza. Ayitsho ukuba zonke iintlobo zezilingo ziza, utsho ukuba nini. Ungathembela kuyo. Esi asizulu apho yonke into igqibelele khona. Lo nguMhlaba apho yonke into yaphukileyo. Kwaye uthi uza kuba neengxaki, Uya kuba nobunzima, ungayithemba, ungathenga isitokhwe kuyo. Ngoku, ayisiyonto ithethwa nguJames yedwa. Yonke iBhayibhile iyayithetha. UYesu wathi emhlabeni uzakuba nezilingo nezilingo, kwaye niya kuba nembandezelo. Uthe uza kuba neengxaki ebomini. Ke kutheni simangaliswa xa sinengxaki? UPeter uthi musa ukumangaliswa xa uvavanywa ngomlilo. Ndithe musa ukwenza ngathi yinto entsha. Wonke umntu uhamba ngamaxesha anzima. Ubomi bunzima. Oku asizulu, lo nguMhlaba. Akukho mntu ukhuselekileyo, akukho mntu uhlala yedwa, Akukho mntu uvaliweyo, akukho mntu uxolelwe. Uthi uza kuba neengxaki kuba ayinakugwenywa. Uyazi, ndikhumbula ngenye imini xa ndandikwikholeji. Kwiminyaka emininzi edlulileyo, bendidlula ngamanye amaxesha anzima kakhulu. Ndaye ndaqala ukuthandaza, ndathi, "Thixo, khawundinyamezele." Kwaye endaweni yezilingo ukuba ngcono, baba mandundu. Ndaze ndathi "Thixo ndiyalufuna unyamezelo," iingxaki zaya zisiba mbi. Ndaze ndathi "Thixo ndiyalufuna unyamezelo," baya besiba mbi ngakumbi. Kwenzeka ntoni? Ewe, ekugqibeleni ndiye ndaqonda ukuba emva kweenyanga ezintandathu, Bendinomonde ngakumbi kunasekuqalekeni kwam, yindlela uThixo awayendifundisa ngayo ngomonde Kwakungobo bunzima. Ngoku, iingxaki azizizo ezinye izifundo zonyulo ukhetho onokuthi uluthathe ebomini. Hayi, ziyafuneka, awunakuphuma kuzo. Ukuze uphumelele kwisikolo sobomi, uza kuhamba ngesikolo sokunkqonkqoza okunzima. Uza kuba neengxaki, azinakugwenywa. Yile nto ithethwa yiBhayibhile. Okwesibini into ethethwa yiBhayibhile ngeengxaki yile. Iingxaki ziyahluka, oko kuthetha ukuba azifani zonke. Awufumani ngxaki efanayo enye emva kwenye. Ufumana ezininzi ezahlukeneyo. Awufumani nje kuphela 'em, kodwa ufumana ezahlukeneyo. Utsho xa ulinga, xa uneengxaki zalo lonke uhlobo. Ungayirhangqa loo nto ukuba uthatha amanqaku. Xa zonke iintlobo zezilingo zingena ebomini bakho. Uyazi, ndingumyezo yegadi, kwaye ndakhe ndenza isifundo, kwaye ndafumanisa ukuba urhulumente olapha eUnited States yahlelwa I-205 iintlobo ezahlukeneyo zokhula. Ndicinga ukuba i-80% yazo ikhula egadini yam. (ehleka) Ndihlala ndicinga ukuba xa ndikhulisa imifuno, Kuya kufuneka ndihlawulise ukwamkelwa kwiFama iWarren's Weed. Kodwa zininzi iintlobo zokhula, Kwaye kukho iintlobo ezininzi zezilingo, zininzi iintlobo zeengxaki. Baza ngobukhulu bonke, beza yonke imilo. Kukho ngaphezu kwe-flavour ezingama-31. Eli gama apha, zonke iintlobo, apho lithetha khona zonke iintlobo zolingo ebomini bakho, ngokwenyani kwisiGrike sithetha ngeendlela ezininzi. Ngamanye amagama, zininzi izithunzi zoxinzelelo ebomini bakho, ungavuma oko? Zininzi izithunzi zoxinzelelo. Zonke azingafani. Kukho uxinzelelo lwezezimali, kukho uxinzelelo lobuhlobo, kukho uxinzelelo lwempilo, kukho uxinzelelo lomzimba, kukho uxinzelelo lwexesha. Utsho ukuba yonke imibala eyahlukileyo. Kodwa ukuba uphuma kwaye uyothenga imoto kwaye uyafuna umbala wesiko, ke kuya kufuneka ulinde. Kwaye emva kokuba yenziwe, emva koko ufumana umbala wakho wesiko. Ngokwenyani ligama elisetyenziswe apha. Ngumbala wesiko, izilingo ezixubileyo ebomini bakho. UThixo ubavumela ngenxa yesizathu. Ezinye zeengxaki zakho zenziwa ngokwezifiso. Abanye babo sinamava nje sonke, njengale, COVID-19. Kodwa yena uthi iingxaki ziyahluka. Kwaye into endithetha ngayo yile kukuba bayahluka kubungakanani. Ngamanye amagama, banzima kangakanani. Ziyahluka rhoqo, kwaye kunjalo. Asazi ukuba le nto izokuhlala ixesha elingakanani. Asazi ukuba kunzima kangakanani. Ndibone umqondiso ngenye imini owathi, Yonke imvula kufuneka ingene ebomini "kodwa iyahlekisa." (ehleka) Kwaye ndicinga ukuba injalo indlela abantu abaninzi baziva ngoku. Iyahlekisa. Iingxaki zinqabile kwaye ziyahluka. Izinto zesithathu azithethayo uYakobi ukuze singothuki Iingxaki azingalindeleki. Azilindeleki. Utsho xa izilingo zininzi ebomini bakho, Ukuba uthatha iinowuthi, jikeleza eli binzana. Ziyahlangana ebomini bakho. Bona, akukho ngxaki ivelayo xa uyifuna okanye xa ungayifuni. Iza nje xa ifuna ukuza. Inxalenye yesizathu kukuba yingxaki. Iingxaki ziza ngexesha elililo. Ngaba wakhe waziva njengengxaki ungene ebomini bakho, uyahamba, hayi ngoku. Ngokwenyani, njengangoku? Apha kwiCawa yaseSaddleback, besikwiphulo elikhulu ukuphupha ngekamva. Kwaye ngequbuliso ikhithi ye-coronavirus. Kwaye ndiyahamba, hayi ngoku. (chuckles) Hayi ngoku. Ngaba ukhe wawunayo itayara eflatini xa wawusele ufike kade? Awufumani tayara yasesicaba xa unexesha elininzi. Ungxamile ukuya kwindawo ethile. Kufana neentsana zomntwana kwingubo yakho entsha njengokuba usiya kutyelelo olubalulekileyo lwangokuhlwa. Okanye wahlulahlula ibhulukhwe yakho ngaphambi kokuba uthethe. Ngokwenyani yenzekile kum ngexesha elinye ngeCawa kudala. Abanye abantu, abanamonde, abanakulinda umnyango ovukayo. Banokufumana nje, kufuneka benze, Bafanele ukuyenza ngoku, kufuneka bayenze ngoku. Ndikhumbula iminyaka emininzi eyadlulayo bendiseJapan, kwaye bendimi ecaleni kwendlela ephantsi komhlaba elinde indlela engaphantsi ukufika, nokuvula kwayo, namasango avulekile, nendoda yaseJapan ngoko nangoko Ndihlambe kum njengoko bendimi apho. Kwaye ndacinga, kutheni nam, kutheni ngoku? Azilindelekanga, ziyeza xa ungazifuni. Awunakuzichaza kwangaphambili iingxaki ebomini bakho. Ngoku qaphela, ithi xa zonke iintlobo zezilingo, nini, azinakugwenywa, zonke iintlobo, ziyahluka, isihlwele ebomini bakho, ukuba abahlelekanga, uthi musa ukubacaphukela njengabangeneleli. Uthini apha? Ewe, ndiza kukuchaza ngakumbi ngokweenkcukacha. Kodwa nantsi into yesine ethi iBhayibhile ngeengxaki. Iingxaki zinenjongo. Iingxaki zinenjongo. UThixo unenjongo kuyo yonke into. Nezinto ezimbi ezenzekayo ebomini bethu, Unokukhupha okulungileyo kubo. UThixo akanyanzelekanga ukuba abangele yonke ingxaki. Uninzi lweengxaki esizibangela zona. Abantu bathi, kutheni abantu begula? Ewe, esinye isizathu kukuba asenzi into athi masiyenze. Ukuba sitye oko uThixo asiyalela kona, ukuba silele njengoThixo usixelela ukuba siphumle, Ukuba siyazilolonga ngokwendlela esixelelwa nguThixo ukuba sizilolonge ngayo, ukuba asivumelanga iimvakalelo ezimbi kubomi bethu NjengoThixo uxela, ukuba sithobela uThixo, ngekhe sibanazo uninzi lweengxaki zethu. Izifundo zibonise ukuba malunga ne-80% yeengxaki zempilo kweli lizwe, eMelika, kubangelwa yile nto kuthiwa iindlela zokuphila ezingapheliyo. Ngamanye amagama, asenzi into elungileyo. Asenzi into esempilweni. Sisoloko sisenza into ezenzakalisayo. Kodwa le nto ayithethayo ilapha, iingxaki zinenjongo. Utsho xa udibana neengxaki. qaphela ukuba beza kuvelisa. Yenza isangqa kula mabinzana, eza kuvelisa. Iingxaki zinokuba nemveliso. Ngoku, abavelisi ngokuzenzekelayo. Le ntsholongwane ye-COVID, ukuba andiphenduli ngomhla olungileyo, ayizukuvelisa nto intle ebomini bam. Kodwa ukuba ndaphendula ngendlela eyiyo. zezona zinto zimbi kakhulu ebomini bam Unokuvelisa ukukhula kunye nokuxhamla kunye nentsikelelo, ebomini bakho nasebomini bam. Beza ukuvelisa. Utsho apha ukuba ukubandezeleka noxinzelelo kunye nosizi, ewe, kwaye nokugula kunokuphumeza okuthile ixabiso ukuba siyayivumela. Konke kukhetho lwethu, konke kukwimo yethu. UThixo usebenzisa ubunzima kubomi bethu. Uthi, kuhle, uyenza njani loo nto? UThixo ubusebenzisa njani ubunzima kunye neengxaki kubomi bethu? Kulungile, enkosi ngokubuza, kuba indinyana elandelayo okanye kwinxalenye elandelayo yeendinyana zitsho ukuba uThixo uzisebenzise ngeendlela ezintathu. Iindlela ezintathu, uThixo usebenzisa iingxaki ebomini bakho ngeendlela ezintathu. Okokuqala, iingxaki kuvavanya ukholo lwam. Ngoku, ukholo lwakho lufana nesihlunu. Umsipha awunakomelela ngaphandle kokuba uvavanyiwe, Ngaphandle kokuba yoluliwe, ngaphandle kokuba ibekwe phantsi koxinzelelo. Awukhulisi izihlunu ezomeleleyo ngokungenzi nto. Uhlakulela izihlunu ezomeleleyo ngokuzolula kwaye ubomeleza kwaye ubavavanye kwaye uzityhalele kude kube sekupheleni. Ke yena uthi iingxaki zeza kuvavanya ukholo lwam. Uthi qaphela ukuba beza kuvavanya ukholo lwakho. Ngoku, olo vavanyo lwegama khona apho, lelo lixesha Ngamaxesha okubhalwa kwebhayibhile oko kwakusetyenziselwa ukucoca izinyithi. Kwaye into obuya kuyenza ukuba ungathatha isinyithi exabisekileyo isilivere okanye igolide, okanye enye into, kwaye ubuyayibeka embizeni enkulu, kwaye uya kuyitshisa kumaqondo obushushu aphezulu kakhulu, kutheni? Kumaqondo obushushu aphezulu, zonke izinto ezingcolileyo zitshisiwe. Kwaye eyona nto iseleyo yigolide ecocekileyo isilivere ecocekileyo. Ligama lesiGrike apha lokuvavanywa. Ngumlilo wokucoca xa uThixo ebeka ubushushu kwaye ivumela oko kubomi bethu, itshisa izinto ezingabalulekanga. Uyayazi into eza kwenzeka kwiiveki ezimbalwa ezilandelayo? Into emnandi ukuba sonke besicinga ukuba ibaluleke ngokwenene, sizakuqonda, hmm, ndidibene kulungile ngaphandle kwalonto. Kuya kuhlengahlengisa izinto eziphambili ngokubaluleka, kuba izinto zizokutshintsha. Ngoku, imizekelo yendlela yokuvavanya ukholo lwakho Ngaba amabali athetha ngoYobhi osebhayibhileni. Kukho incwadi epheleleyo ngoYobhi. Uyazi, uYobhi wayengoyena mntu wayesisityebi kunabo bonke eBhayibhileni, kwaye ngosuku olunye, waphulukana nayo yonke into. Waphulukana nosapho lonke, waphulukana nobutyebi bakhe, Ulahlekelwe ngabahlobo bakhe bonke, Abagrogrisi bahlasela usapho lwakhe, waba nesifo esinganyangekiyo, esibuhlungu kakhulu ebenganyangeki. Kulungile, uyisiphelo. Kwaye ke uThixo wayevavanya ukholo lwayo. Kwaye uThixo kamva uyibuyisela inyani kabini oko wayenako ngaphambi kokuba aye kuvavanyo olukhulu. Ngamaxesha athile ndiye ndafunda isicatshulwa kwindawo ethile kwakudala bathi abantu banjengeebhegi zeti. Awuyazi ngokuqinisekileyo into eku-em ude uyeke emanzini ashushu. Kwaye emva koko uyakubona okungaphakathi kubo. Ngaba ukhe wawunalo olunye lwale mihla ishushu yamanzi? Wakhe wakhetha enye yeeveki ezishushu okanye iinyanga? Sikwimeko enamanzi ashushu ngoku. Kwaye into eza kuphuma kuwe yeyona nto ingaphakathi kuwe. Ingathi izinyo. Ukuba ndinombhobho wamazinyo kwaye ndiyawushukumisa, yintoni eza kuphuma? Utsho, kuhle, izinyo. Hayi, akanyanzelekanga. Ibingathetha izinyo ngaphandle, kodwa inokuba ne-marinara sauce okanye ibhotolo yamandongomane okanye imayonesi ngaphakathi. Yintoni eza kuphuma xa ibekwa phantsi koxinzelelo nayiphi na into ekuyo. Kwaye kwiintsuku ezizayo njengoko ujongene nentsholongwane ye-COVID, into eza kuphuma kuwe yeyona nto ingaphakathi kuwe. Kwaye ukuba ugcwele ubukrakra, oko kuya kuphuma. Kwaye ukuba ugcwele kukudandatheka, oko kuya kuphuma. Kwaye ukuba ugcwele ngumsindo okanye unxunguphalo okanye unetyala okanye ihlazo okanye ukungazithembi, oko kuya kuphuma. Ukuba ugcwele luloyiko kukuba, nantoni na engaphakathi kuwe yintoni eza kuphuma xa uxinzelelo lubekwa kuwe. Kwaye yile nto ayithethayo apha, Iingxaki zivavanya ukholo lwam. Uyazi, kwiminyaka eyadlulayo, ndadibana nendoda endala ngokwenene kwinkomfa iminyaka emininzi edlulileyo eMpuma. Ndicinga ukuba yayiyiTennessee. Kwaye yena, lo mfo mdala undixelele indlela ezahlukanisayo esona sibonelelo sikhulu ebomini bakhe. Ndathi, "Kulungile, ndifuna ukuva eli bali. "Ndixelele yonke into ngayo." Kwaye yayiyintoni na ukuba usebenzile ekubumbeni ngamaplanga ubomi bakhe bonke. Wayesisibambiso ubomi bakhe bonke. Kodwa ngenye imini ngexesha lokudodobala kwezoqoqosho, wangena umphathi wakhe, wathi kuye, "Ugxothiwe." Kwaye bonke ubungcali bakhe baphuma ngomnyango. Wayetshatile eneminyaka engama-40 enomfazi nosapho kwaye alikho elinye ithuba lomsebenzi elijikeleze yena, kwaye kwabakho ukuwohloka kwempahla okwenzeka ngelo xesha. Kwaye wayedimazekile, kwaye esoyika. Abanye bakho banokuziva njalo ngoku. Usenokuba sele ulahliwe. Mhlawumbi woyika ukuba uya kuba Ebekwe phantsi kwale ngxaki. Kwaye wayenomvandedwa, wayenoloyiko. Uthe, ndibhale phantsi, wathi, "Ndivile ngathi "ilizwe lam lavela lusuku lokugxothwa kwam. Kodwa xa ndagodukayo, ndaxelela umfazi wam okwenzekileyo, Wabuza, "Wenza ntoni ngoku?" "Ndathi, kulungile ke emva kokuba ndigxothiwe, Ndiza kwenza into ebendisoloko ndifuna ukuyenza. "Yiba ngumakhi. "Ndiza kubambisa indlu yethu "ndiza kungena kwishishini lokwakha." Kwaye wandixelela, "Uyazi, Rick, iphulo lam lokuqala "yayilokwakha iimoto ezimbini ezincinci." Yile nto ayenzileyo. Kodwa wathi, "Kwiminyaka emihlanu, bendisisigidigidi." Igama lale ndoda, indoda ebendithetha kuyo, yayinguWallace Johnson, kunye neshishini elaliqalayo emva kokugxothwa wabizwa ngokuba yiHolide zeIholide. Iiholide zeIholide. UWallace wandixelela, "URick, namhlanje, ukuba ndingabinakho Indoda endigxothileyo, ndingathanda ngokunyaniseka "enkosi ngento ayenzileyo." Ngela xesha kwenzeka ngalo, andizange ndiqonde kutheni ndigxothiwe, kutheni ndigxothiwe nje. Kodwa kamva kuphela ndabona ukuba yayingenanto kaThixo kunye nesicwangciso esimangalisayo sokundifaka kum umsebenzi wokukhetha kwakhe. Iingxaki zinenjongo. Banenjongo. Baqonde ukuba beza kuvelisa, kwaye yenye yezinto zokuqala bavelisa ukholo olukhulu ngakumbi, bayavavanya ukholo lwakho. Inombolo yesibini, nantsi inzuzo yesibini yesibini yeengxaki. Iingxaki zikhulisa unyamezelo lwam. Bayakhulisa unyamezelo lwam. Le yinxalenye elandelayo yebinzana, utsho ezi ngxaki ziza kukuhlakulela unyamezelo. Bakhulisa unyamezelo ebomini bakho. Zithini iziphumo zeengxaki ebomini bakho? Ukuhlala amandla. Kukukwenyani amandla okujongana noxinzelelo. Namhlanje sikubiza ngokuba ngumonde. Ukukwazi ukuphinda ubuye umva. Kwaye lolona phawu lubalaseleyo ekufuneka umntwana afunde kwaye wonke umntu omdala kufuneka afunde ukuzomeleza. Kuba wonke umntu uyawa, wonke umntu ukhubeka. Wonke umntu uhamba ngamaxesha anzima, Wonke umntu uyagula ngamaxesha ahlukeneyo. Wonke umntu unokusilela ebomini bakhe. Yindlela ojongana ngayo noxinzelelo. Unyamezelo, uyaqhubeka nokuqhubeka nokuxhoma. Ewe, ufunda njani ukwenza oko? Ufunda njani ukujongana noxinzelelo? Ngamava, yeyona ndlela kuphela. Awufundi ukujongana noxinzelelo kwincwadi ebhaliweyo. Awufundi ukuba ungaphatha njani uxinzelelo kwisemina. Ufunda ukujongana noxinzelelo ngokubekwa phantsi koxinzelelo. Kwaye awuyazi into ekuwe ude ube ubekwe kuloo meko. Kunyaka wesibini weCawa yaseSaddleback, ngo-1981, Ndidlule kwixesha lokudakumba apho veki nganye bendifuna ukurhoxa. Kwaye bendifuna ukuyeka yonke intsasa yangeCawa. Kodwa, bendingenaxesha elinzima ebomini bam, kwaye okwangoku ndibeka inyawo elinye ngaphambi kwelinye njengoThixo, musa ukuba ndakhe ibandla elikhulu, kodwa Thixo, ndiphumelele kule veki. Kwaye andizukuyeka. Ndonwabile ukuba andiyekanga. Kodwa ndivuya kakhulu kuba uThixo engazange andincame. Kuba olo yayiluvavanyo. Kwaye kuloo nyaka wokuvavanywa, ndakhula ngokomoya kunye nobudlelwane kunye neemvakalelo kunye namandla engqondo lonto yandivumela iminyaka kamva ukujikisa zonke iintlobo zebhola kunye nokusingatha isixa esikhulu soxinzelelo emehlweni oluntu kuba ndiye ndadlula kuloo nyaka Ubunzima obucekeceke ngaphandle, omnye emva komnye. Uyazi, iMelika yayinothando lokuthandana ngokulula. Siyakuthanda ukusebenziseka lula. Ngeentsuku kunye neeveki ezizayo kule ngxaki, kukho izinto ezininzi ezingalunganga. Okungalunganga. Kwaye siza kwenza ntoni ngathi xa yonke into ingonwabanga, xa kufuneka uqhubeke nje xa ungaziva ufuna ukuqhubeka. Uyazi, usukelo lomnxantathu okanye injongo yomtshato ayisi malunga nesantya, ukuba ufike ngokukhawuleza kangakanani apho, kungakumbi ngonyamezelo. Ngaba uyawugqiba ugqatso? Ululungiselela njani olo hlobo lwezinto? Ngokudlula kubo. Ke xa usoluliwe kwiintsuku ezizayo, ungazikhathazi ngayo, ungazikhathazi ngayo. Iingxaki zikhulisa unyamezelo lwam. Iingxaki zinenjongo, zinenjongo. Into yesithathu asixelela yona uJames ngeengxaki sidlula apha kukuba iingxaki zivuthisa isimilo sam. Kwaye ukutsho oku kwivesi yesine ka-Yahluko wokuqala. Utsho kodwa, le nkqubo iqhubeke ude ube ngabantu abanobuntu obuqolileyo kunye nengqibelelo engenabala obuthathaka. Ngaba awungethandi ukuba nayo? Ngaba ungathanda ukuva abantu besithi, uyazi, loo mfazi akanabala abuthathaka kwisimo sakhe. Indoda, loo mfo ayinabala abuthathaka kwisimo sayo. Ulufumana njani olo hlobo lomlinganiswa oqolileyo? Inkqubo iqhubeke de ube ngabantu, amadoda nabafazi, benempawu ezivuthiweyo kunye nengqibelelo engenabala obuthathaka. Uyazi, bekukho uphando oludumileyo olwenziwe uninzi, kwiminyaka emininzi eyadlulayo eRussia endikukhumbulayo ukubhala phantsi, kwaye kwakusisiphumo sendlela eyahlukileyo yokuphila iimeko kuchaphazele ixesha elide okanye ixesha lokuphila kwezilwanyana ezahlukeneyo. Kwaye ke babeka ezinye izilwanyana kubomi obulula. kwaye babeka ezinye izilwanyana ubunzima ngakumbi kunye neemeko ezinzima. Kwaye izazinzulu zifumanise ukuba izilwanyana ebekwe etafileni kunye neemeko ezilula, iimeko, ezo meko zokuphila, eneneni zaba buthathaka. Ngenxa yokuba iimeko zazilula kakhulu, baba buthathaka kwaye uchaphazeleka ngakumbi kukugula. Kwaye abo babekwimeko entle babhubha kwangoko kunabo bavunyelwe ukuba babe namava ubunzima obuqhelekileyo bobomi. Ayinamdla? Kuyinyani ngezilwanyana ndiqinisekile kuyinyani isimilo sethu, ngokunjalo. Kwinkcubeko yaseNtshona ingakumbi kwihlabathi lanamhlanje, sibe nayo ngokulula ngeendlela ezininzi. Ukuphila ubomi obulula. Inombolo yeenjongo zikaThixo ebomini bakho kukwenzela ukuba ube njengoYesu Kristu kwisimo. Ukucinga njengoKristu, ukwenza njengoKristu, ukuba uphile njengoKristu, ukuthanda njengoKristu, ukuba nethemba njengoKristu. Kwaye ukuba iyinyani, kwaye iBhayibhile iyiphindaphinda le nto, ke uThixo uyakukuthatha ngezinto ezifanayo ukuba uYesu wadlula ukuze akhule ubuntu bakho. Uthi, kuhle, unjani uYesu? UYesu uluthando novuyo noxolo nomonde nobubele, isiqhamo soMoya, zonke ezo zinto. Kwaye uThixo uvelisa njani ezo zinto? Ngokusibeka kwimeko echaseneyo. Sifunda umonde xa silingwa ukuba singabi namonde. Sifunda uthando xa sibekwa ngabantu abangathandaniyo. Sifunda ulonwabo embindini wentlungu. Sifunda ukulinda kwaye sibe lolo hlobo lonyamezelo xa kufuneka silinde. Sifunda ububele xa silingwa ukuba sizingce. Kwiintsuku ezizayo, iya kuba nokuhenda Ukuzingela nje kwindawo engaphantsi, nokubuyela ngaphakathi, kwaye ndatsho, sizosikhathalela. Me, ngokwam, kwaye nam, usapho lwam, thina sobane kwaye akusekho ulibale ngumntu wonke. Kodwa loo nto iya kuwucekisa umphefumlo wakho. Ukuba uza kuqala ukucinga malunga nabanye abantu kunye nokunceda abo bahlelelekileyo, abantu abalupheleyo kunye nezo zinemeko yokubandulula, kwaye ukuba uya kufikelela, umphefumlo wakho uya kukhula, Intliziyo yakho iya kukhula, ube ngumntu olunge ngakumbi Ekupheleni kwale ngxaki kunakuqala, kulungile? Uyabona, Thixo, xa efuna ukwakha isimilo sakho, unokusebenzisa izinto ezimbini. Ungasebenzisa iLizwi lakhe, inyani iyasitshintsha, kwaye unokusebenzisa iimeko, ekunzima kakhulu. Ngoku, uThixo angathanda ukusebenzisa indlela yokuqala, uLizwi. Kodwa asisoloko siphulaphula eLizwini, ngoko usebenzisa iimeko ukufumana ingqalelo yethu. Kwaye kunzima ngakumbi, kodwa ihlala isebenza ngakumbi. Ngoku, uthi, kulungile, kulungile, Rick, ndiyayifumana, ukuba iingxaki ziyahluka kwaye zinenjongo, kwaye balapha ukuvavanya ukholo lwam, kwaye baya kuba Zonke iintlobo ezahlukileyo, kwaye azize xa ndifuna 'em. Kwaye uThixo angasebenzisa 'em ukukhulisa isimilo sam kunye nokuqina ubomi bam. Ke yintoni endimele ndiyenze? Kwiintsuku ezimbalwa ezizayo nakwiiveki kwaye mhlawumbi kwiinyanga ezizayo njengoko sijongana nale ngxaki yekoronavirus sisonke, Ndifanele ndiphendule njani ebomini bam? Kwaye andithethi nje ngentsholongwane. Ndithetha ngeengxaki eziza kuza njengesiphumo yokungabikho emsebenzini okanye abantwana ekhaya okanye zonke ezinye izinto eziphazamisayo ebomini njengoko iqhele ukwenzeka. Ndifanele ndiphendule njani kwiingxaki zobomi bam? Ewe, kwakhona, uYakobi ucacile. kwaye usinika ezintathu ezisebenzayo. ziimpendulo ezinkulu, kodwa ziimpendulo ezichanekileyo. Ngapha koko, xa ndikuxelela eyokuqala, uza kuya, kuya kufuneka undidlale. Kodwa zikho iimpendulo ezintathu, zonke ziqala nge-R. Impendulo yokuqala ayithethayo xa ukho Ukuhamba ngamaxesha anzima, vuya. Uyahamba, uyadlala? Oko kuvakala kusisithunzi. Anditsho ngovuyo ngale ngxaki. Ndilandele kule umzuzu nje. Utsho uyithathele ingqalelo njengento elungileyo. Phatha ezi ngxaki njengabahlobo. Ngoku, musa ukungaqondi kum. Akathethi fake. Akathethi nxiba incam yeplastiki, Yenza ngathi yonke into ilungile kwaye ayiyiyo, kuba akunjalo. IPollyanna, intombazana encinci ye-Orphan Annie, ilanga izakuphuma ngomso, isenokungaphumi ngomso. Akathethi ukukhanyela inyani, hayi kwaphela. Akathethi ukuba yimbonakalo. Owu nyana, ndiyaya ezintlungwini. UThixo uyithiyile intlungu njengawe. Owu, ndiyahlupheka, ngubani. Kwaye unale ngxaki yokufela ukholo, kwaye uyazi, Ndinalo mvakalelo yokomoya kuphela xa ndiziva kakubi. Hayi, hayi, hayi, uThixo akafuni ukuba ube ngumfeli-nkolo. UThixo akafuni ukuba ube nayo isimo sengqondo sokujonga intlungu. Uyazi, ndiyakhumbula ngexesha elinye endandidlula kulo ixesha elinzima ngokwenene kwaye umhlobo wayezama ukuba nobubele bathi, Uyazi wena Rick, hlaziyeka "kuba izinto zinokuba zimbi ngakumbi." Kwaye qikelela ukuba yintoni, baye baba mandundu. Oko kwakungekho luncedo konke konke. Ndaziva ndonwabile kwaye baye besiba krakra. (chuckles) Ke akukho malunga fake Pollyanna ukucinga olungileyo. Ukuba ndisebenza ngenzondelelo, ndiyakhuthala. Hayi, hayi, hayi, hayi, kuninzi, kunzulu kakhulu kunoko. Asonwabanga, simamele, asivuyiyo yingxaki. Siyavuya kwingxaki, ngelixa sikule ngxaki, zisekhona izinto ezininzi onokuvuya ngazo. Ayisiyo ingxaki ngokwayo, kodwa ezinye izinto ukuba singavuya malunga neengxaki. Kutheni sinokuba sonwabile kwanale ngxaki? Kuba Siyazi ukuba kukho injongo ngayo. Kuba siyazi ukuba uThixo akasayi kuze asishiye. Kuba sazi izinto ezininzi ezahlukeneyo. Siyazi ukuba uThixo unenjongo. Qaphela uthi uyithathele ingqalelo njengolonwabo olunyulu. Yenza isangqa kwigama liqwalasele. Cinga ngeendlela zokwenza umbono wakho ngabom. Unokulungiswa kwesimo sengqondo ukuba uza kwenza apha. Ngaba lukhetho lwakho ukuba ugcobe? Kwindumiso 34 ivesi yokuqala, utsho Ndiya kumbonga uYehova ngamaxesha onke, Ngalo lonke ixesha. Kwaye uthi ndiza. Kukhetho lomyolelo, isigqibo. Kukuzimisela, lukhetho. Ngoku, uza kudlula kwezi nyanga zizayo nokuba unesimo esihle okanye isimo sengqondo esibi. Ukuba isimo sakho sengqondo sibi, uya kuzenzela Kwaye wonke umntu okujikeleze usizi. Kodwa ukuba isimo sakho sengqondo silungile, lukhetho lwakho ukuba ungonwaba. Utsho, masijonge kwicala eliqaqambileyo. Masifumane izinto esinokumbulela ngazo uThixo. Kwaye masiqonde ukuba nokuba kubi, UThixo unokuzisa okuhle kokubi. Yenza uhlengahlengiso ngesimo sengqondo. Andizukuva krakra kule ngxaki. Ndiza kuba ngcono kule ngxaki. Ndiza kukhetha, lukhetho lwam lokuvuya. Kulungile, inombolo yesibini, yesibini R isicelo. Kwaye oko kukucela kuThixo ubulumko. Le nto ufuna ukuyenza nangaliphi na ixesha usengxakini. Ufuna ukwazi ubulumko kuThixo. Kwiveki ephelileyo, ukuba umamele umyalezo weveki ephelileyo, kwaye ukuba uyiphosile, buyela kwi-intanethi kwaye ubukele loo myalezo ukuyenza ukutyhutyha intili yentsholongwane ngaphandle koloyiko. Kukhetho lwakho ukuba ugcobe, kodwa ke ubuza kuThixo ubulumko. Kwaye ubuza kuThixo ubulumko kwaye uthandaze kwaye uthandazela malunga neengxaki zakho. Indinyana yesixhenxe iyatsho oku kuYakobi. Ukuba kule nkqubo akukho namnye kuwe ongazi ukuba uhlangana kanjani nayiphi na ingxaki, oku kuphumile kuguqulelo lwePhillips. Ukuba kwinkqubo akukho namnye kuni ongaziyo ukuba uhlangana njani nayiphi na ingxaki onayo kufuneka ucele kuThixo obapha ngesisa bonke abantu ngaphandle kokubenza bazive benetyala. Kwaye unokuqiniseka ukuba ubulumko obufunekayo uya kunikwa. Batsho ukuba kutheni kuzo zonke izinto ndizocela ubulumko phakathi kwengxaki? Ke ufunda kuyo. Ke ungafunda kwingxaki, Kungenxa yoko le nto ucela ubulumko. Kuluncedo ngakumbi ukuba uyeka ukubuza ukuba kutheni, kutheni lento isenzeka, kwaye uqale ngokubuza, ufuna ndifunde ntoni? Ufuna ukuba ndiyintoni? Ndingakhula njani kule nto? Ndingaba ngumfazi olunge njani? Ndingaba yindoda engcono njani kule ngxaki? Ewe, ndiyavavanywa. Andinaxhala lokuba kutheni. Kutheni engabalulekanga nganto. Yintoni ebalulekileyo yintoni, ndiza kuba yintoni, kwaye ndiza kufunda ntoni kule meko? Kwaye ukuze wenze oko, kuya kufuneka ucele ubulumko. Ke uthi, xa ufuna ubulumko, buza kuThixo, UThixo uza kukunika. Utsho ke wena, Thixo, ndifuna ubulumko njengomama. Abantwana bam baya kuba sekhaya kwinyanga ezayo. Ndidinga ubulumko njengotata. Ndikhokela njani xa imisebenzi yethu isemngciphekweni kwaye andikwazi ukusebenza ngoku? Cela ubulumko kuThixo. Sukubuza ukuba kutheni, kodwa buza ntoni. Ke okokuqala uyavuya, ufumana isimo sengqondo esifanelekileyo Ngokuthi ndiza kubulela uThixo ngengxaki, kodwa ndiza kubulela uThixo kwingxaki. Kuba ilungile kaThixo nokuba ubomi buncancile. Kungenxa yoko le nto ndibiza olu chungechunge "Ukholo lokwenyani olusebenzayo xa uBomi bungasebenzi." Xa ubomi bungasebenzi. Ke ndiyavuya, ndiyacela. Into yesithathu uJames athi ayenze kukuphumla. Ewe, kinda uphume ngaphandle, ungazifumani Yonke imfumba yeemvakalelo. Sukucinezeleka kakhulu ngaphandle kokuba awunakwenza nto. Sukuba nexhala malunga nekamva. UThixo uthi ndizokukhathalela, undithembe. Uyamthemba uThixo ukuba wazi okona kulungileyo. Uyabambisana naye. Awukhe uyijikeleze imeko ophila kuyo. Kodwa uthi nje, Thixo, ndiza kuphumla. Andizukuthandabuza. Andizukuthandabuza. Ndiza kukuthemba kule meko. Ivesi yesibhozo yivesi yokugqibela esiya kujonga kuyo. Ewe, siza kujonga enye ngomzuzu. Kodwa ivesi yesibhozo ithi, kodwa kufuneka ucele ngokunyaniseka ngaphandle kwamathandabuzo emfihlo. Yintoni oyifunayo kukholo olunyulu? Cela ubulumko. Kwaye uthi, Thixo, ndifuna ubulumko, kwaye ndiyabulela Uya kundinika ubulumko. Ndiyabulela, undinika ubulumko. Sukukhubeka, ungathandabuzi, kodwa yikhuphe kuThixo. Uyazi, iBhayibhile iyatsho, ngaphambili xa ndatshoyo ukuba uthethe ezi ntlobo ezininzi zeengxaki. Uyazi, sithetha ngohlobo olwahlukileyo, ezininzi, ezininzi iintlobo zeengxaki. Elo gama ngesiGrike, iintlobo ezininzi zeengxaki, likwigama elinye elichaziweyo kuPetros wokuQala Isahluko sesine, ivesi yesine eyathi UThixo uneentlobo ezininzi zobabalo anokunika lona. Iindidi ezininzi zenceba. Kuyinto efanayo enemibala eyahlukeneyo, eyahlukeneyo, efana nedayimane. Uthini yena apho? Kuyo yonke ingxaki onayo, kukho ubabalo oluvela kuThixo olufumanekayo. Ngazo zonke iintlobo ezininzi zezilingo kunye nembandezelo kunye nobunzima, kukho uhlobo lwesisa nenceba Amandla afuna ukuwanikwa nguThixo ukuthelekisa ingxaki ethile. Udinga ubabalo koku, udinga ubabalo ngenxa yoko, udinga ubabalo koku. U-Thixo uthi ubabalo lwam lubanzi njengeengxaki ojamelene nazo. Ke ndithini? Nditsho ukuba zonke iingxaki ezikhoyo ebomini bakho, kubandakanya le ngxaki yeCOVID, usathana uthetha ukohlula ngezi ngxaki. Kodwa uThixo kuthetha ukukukhulisa kwezi ngxaki. Ufuna ukohlula, Sathana, kodwa uThixo ufuna ukukuphuhlisa. Ngoku, iingxaki eziza ebomini bakho sukuzenzela umntu ongcono. Uninzi lwabantu lube ngabantu abukrakra abasuka kum. Ayizenzi ngokuzenzekelayo ungumntu obhetele. Sisimo sakho sengqondo esenza umahluko. Kwaye kulapho ndifuna ukukupha enye into ekufuneka uyikhumbule. Inani lesine, into yesine ekufuneka uyikhumbule xa ujongene neengxaki kukhumbula Izithembiso zikaThixo. Khumbula izithembiso zikaThixo. Oko kuphantsi kwivesi ye-12. Makhe ndikufundele esi sithembiso. Isahluko sokuqala, iivesi 12. Unoyolo umntu onyamezelayo Ngaphantsi kwesilingo, kuba xa uthe walulinda uvavanyo, Uya kufumana isithsaba sobomi esithembiswe nguThixo, kukho izwi, kwabo bamthandayo. Makhe ndiyifunde kwakhona. Ndifuna ukuba umamele ngenyameko kakhulu. Unoyolo umntu onyamezelayo Ngaphantsi kwesilingo, Ngubani ojongana nobunzima, njengemeko sikuyo ngoku. Unoyolo umntu onyamezelayo, lowo unyamezelayo, okholose kuThixo, okholelwa kuye, kuba xa sele emile uvavanyo, phuma kwicala elingasemva, eli lingo alizukugqibela. Kukho ukuphela kwayo. Uya kuphuma kwelinye icala lomjelo. Uya kufumana isithsaba sobomi. Ewe, andizazi zonke ukuba kuthetha ntoni, kodwa kulungile. Isithsaba sobomi esithembiswe nguThixo kwabo bamthandayo. Kukhetho lwakho ukuba wonwabe. Kukhetho lwakho ukuthemba ubulumko bukaThixo endaweni yokuthandabuza. Cela kuThixo ubulumko bokukunceda kwimeko okuyo. Kwaye ke cela ukholo kuThixo ukuze unyamezele. Kwaye uthi, Thixo, andizukuncama. Nale iza kudlula. Umntu othile wake wabuzwa, yeyiphi oyithandayo Indinyana yeBhayibhile? Yathi, kwenzeka. Ke kutheni uyithanda loo ndinyana? Kuba xa kuvela iingxaki, ndiyazi ukuba azizelanga kuhlala. Zenzeka. (chuckles) Kwaye kuyinyani kule meko ethile. Ayizukuhlala, izakwenzeka. Ngoku, ndifuna ukusondela kule ngcinga. Ingxaki ayenzi zngxaki kwaphela. Ihlala izityhila, ihlala izityhila. Le ngxaki inokubhengeza ezinye iindlela zokuqhawula umtshato emtshatweni wakho. Le ntlekele inokubhengeza ezinye iindlela zokusilela kulwalamano lwakho noThixo. Le ntlekele inokuveza ezinye iindlela zokuziphatha, ukuba indlela uzityhalela ngamandla. Kwaye ke zimisele ukuvumela uThixo ukuba athethe nawe malunga nezinto ezifuna ukutshintsha kubomi bakho, kulungile? Ndifuna ukuba ucinge ngale veki, kwaye mandikunike amanye amanyathelo afanelekileyo, kulungile? Amanyathelo anokusebenza, inombolo yokuqala, ndifuna wena ukukhuthaza omnye umntu ukuba amamele lo myalezo. Ngaba uza kuyenza loo nto? Ngaba uza kudlulisa eli khonkco kwaye ulithumele kumhlobo? Ukuba oku kuyakhuthaza, wugqithisele, kwaye ube ngumkhuthazi kule veki. Wonke umntu okujikelezileyo ufuna ukhuthazo ngeli xesha lentlekele. Ke thumela 'ikhonkco. Iiveki ezimbini ezidlulileyo xa sasinecawe kwizifundo zethu, kwihlathi iLake kunye nazo zonke ezinye iikhampasi zethu zeSaddleback, bamalunga ne-30, 000 abantu ababekho ecaweni. Kodwa kule veki iphelileyo xa bekufuneka sigqibe iinkonzo kwaye sonke kufuneka sibukele kwi-intanethi, ndatsho, wonke umntu uye kwiqela lakho elincinci kwaye umeme abamelwane bakho Mema nabahlobo bakho kwiqela lakho elincinci, sasine-181,000 Ii-ISPs zamakhaya ethu zixhunyiwe kwinkonzo. Oko kuthetha ukuba mhlawumbi isiqingatha sesigidi sabantu ubukele umyalezo weveki ephelileyo. Isiqingatha sesigidi okanye ngaphezulu. Kutheni, ngoba uxelele omnye umntu ukuba abukele. Kwaye ndifuna ukukhuthaza ukuba ube lingqina leendaba ezilungileyo Kule veki kwilizwe elizidinga iindaba ezilungileyo. Abantu kufuneka beve le. Thumela ikhonkco. Ndiyakholelwa ukuba singabakhuthaza abantu abasisigidi kule veki ukuba sonke singadlula kumyalezo, kulungile? Inani lesibini, ukuba ukwiliqela elincinci, asizukungena ukwazi ukudibana, ubuncinci kule nyanga, ngokuqinisekileyo. Kwaye ke ndingakukhuthaza ukuba usete intlanganiso ebonakalayo. Unokuba neqela elikwi-intanethi. Uyenza njani loo nto? Ewe, kukho iimveliso phaya ngaphandle njengeZoom. Ufuna ukukhangela ukuba, Sondeza, simahla. Kwaye ungangena apho kwaye uxelele wonke umntu ukuba afumane i-Zoom kwifowuni yabo okanye kwikhompyuter yabo, kwaye uyakwazi ukudibanisa abantu abathandathu okanye abasibhozo okanye abalishumi, kwaye unokuba neqela lakho kule veki kwi-Zoom. Kwaye niyakwazi ukubonana ubuso ngobuso, njenge-Facebook Live, okanye kufana nabanye, uyazi, yintoni kwi-iPhone xa ujonga iFaceTime. Ewe, awukwazi ukwenza oko ngeqela elikhulu, kodwa ungayenza nomntu omnye. Kwaye ke khuthazanani ubuso ngobuso ngetekhnoloji. Ngoku sinetekhnoloji ebingafumaneki. Ke jonga Zoom kwiqela elincinci elibonakalayo. Kwaye eneneni apha kwi-Intanethi Unokufumana ulwazi, nalo. Inani lesithathu, ukuba awukho kwiqela elincinci, Ndiza kukunceda ungene kwiqela elikwi-intanethi kule veki, ndiya. Konke okufuneka ukwenze kukuthumela i-imeyile, PastorRick@saddleback.com. UmfundisiRick @ ulusizi, igama elinye, SADDLEBACK, i-sisdleback.com, kwaye ndiza kukudibanisa kwiqela elikwi-intanethi, kulungile? Emva koko qiniseka ukuba uyinxalenye yeCawa yaseSaddleback ukufunda incwadana yakho yemihla ngemihla endiyithumelayo yonke imihla ngeli xesha lobunzima. Ibizwa ngokuba yi "Saddleback ekhaya." Inazo iingcebiso, inemiyalezo ekhuthazayo, zineendaba onokuzisebenzisa. Into esebenzayo kakhulu. Sifuna ukuhlala sinxibelelana nawe yonke imihla. Fumana "i-Saddleback ekhaya." Ukuba andinayo idilesi ye-imeyile, ke awuyifumani. Kwaye ungandithumela nge-imeyile idilesi ye-imeyile ukuya ku-PrinceRick@saddleback.com, kwaye ndiza kukubeka kuluhlu, kwaye uza kufumana unxibelelwano lwemihla ngemihla, incwadana yemihla ngemihla "Saddleback eKhaya". Ndifuna nje ukusondela ngaphambi kokuba ndithandaze Ngokuphinda utsho ukuba ndikuthanda kangakanani. Bendihlala ndikuthandazela yonke imihla, kwaye ndiza kuqhubeka ndikuthandazela. Siza kuyifumana ngoku kunye. Esi ayisosiphelo sebali. UThixo usetroneni yakhe, kwaye uThixo uza kuyisebenzisa ukukhulisa ukholo lwakho, ukuzisa abantu elukholweni. Ngubani owaziyo ukuba kwenzeka ntoni? Singalufumana ukuvuselelwa ngokomoya kuyo yonke le nto kuba abantu bahlala bebuyela kuThixo xa badlula kumaxesha anzima. Makhe ndikuthandazele. Bawo, ndifuna ukubulela wonke umntu Mamela ngubani ngoku. Ngamana singawuphila umyalezo kaYakobi wokuqala, iivesi zokuqala ezintandathu okanye ezisixhenxe. Kwanga singafunda ukuba iingxaki ziyeza, ziyakwenzeka, ziyahluka, zinenjongo, kwaye uya kuthi sizisebenzise zilungile ebomini bethu ukuba siyakuthembela. Sincede singathandabuzi. Sincede ukuba sonwabe, sicela, kunye nokukhumbula izithembiso zakho. Kwaye ndithandazela wonke umntu ukuba babe neveki esempilweni. Ngegama likaYesu, amen. UThixo akusikelele, wonke umntu. Dlulisela komnye umntu.
&quot;Ukholo olujongana nobunzima&quot; kunye noMfundisi uRick Warren
< start="1.34" dur="1.42"> - Molweni, nonke, ndinguRick Warren, >
< start="2.76" dur="1.6"> Umfundisi kwiCawa yaseSaddleback nombhali >
< start="4.36" dur="2.58"> of "Iinjongo eziBanzi ziBomi" kunye nesithethi >
< start="6.94" dur="2.71"> kwinkqubo "yeThemba lemihla ngemihla". >
< start="9.65" dur="2.53"> Enkosi ngokusebenza kolu sasazo. >
< start="12.18" dur="3.59"> Uyazi, kule veki apha e-Orange County, eCalifornia, >
< start="15.77" dur="2.47"> urhulumente wabhengeza ukuba bayavala >
< start="18.24" dur="4.19"> Zonke iintlanganiso zalo naluphi na uhlobo, zalo naluphi na ubungakanani >
< start="22.43" dur="1.46"> kude kube sekupheleni kwenyanga. >
< start="23.89" dur="2.81"> Wamkelekile kwiCawa yaseSaddleback ekhayeni. >
< start="26.7" dur="1.41"> Ndiyavuya ulapha. >
< start="28.11" dur="5"> Kwaye ndiza kukufundisa ngevidiyo >
< start="33.31" dur="4.59"> phakathi ngoku nangaliphi na ixesha le ngxaki ye-COVID-19 iphela. >
< start="37.9" dur="2.12"> Wamkelekile kwiCawa yaseSaddleback ekhayeni. >
< start="40.02" dur="3.34"> Kwaye ndifuna ukumema rhoqo ngeveki, >
< start="43.36" dur="2.25"> yinxalenye yeenkonzo zonqulo kunye. >
< start="45.61" dur="2.91"> Siza kuba nomculo kwaye sinqule kunye, >
< start="48.52" dur="2.44"> kwaye ndiza kube ndikhupha ilizwi elivela eLizwini likaThixo. >
< start="50.96" dur="3.01"> Uyazi, njengoko bendicinga ngale nto, >
< start="53.97" dur="2.15"> ngendlela, kuqala kufuneka ndixelele. >
< start="56.12" dur="3.84"> Ndicinge ukuba bazakusirhoxisa ukuba sihlangane. >
< start="59.96" dur="3.6"> Kwaye ke kule veki, ndandinesitudiyo saseSaddleback >
< start="63.56" dur="1.32"> ndathutha ndaya kwigaraji yam. >
< start="64.88" dur="2.34"> Nditsho ndicofa oku kwigaraji yam. >
< start="67.22" dur="2.46"> Iqela lam lobuchwephesha lobuchwephesha. >
< start="69.68" dur="1.979"> Ngena, bafo, yithi into kubo bonke. >
< start="71.659" dur="2.101"> (ehleka) >
< start="73.76" dur="3.12"> Bancede ukuyihambisa apha kwaye bayimisa yonke >
< start="76.88" dur="4.74"> ukuze sikwazi ukuthetha nawe ngeempelaveki. >
< start="81.62" dur="3.32"> Ngoku, njengoko bendicinga ngento ekufuneka siyigubungele >
< start="84.94" dur="3.22"> Ngeli xesha le COVID-19 inengxaki, >
< start="88.16" dur="2.98"> Ndakhawuleza ndacinga ngencwadi kaJames. >
< start="91.14" dur="2.67"> Incwadi kaJames yincwadi encinci kakhulu >
< start="93.81" dur="2.15"> kufutshane nesiphelo seTestamente eNtsha. >
< start="95.96" dur="3.81"> Kodwa iluncedo kwaye iluncedo kakhulu, >
< start="99.77" dur="5"> le ncwadi ndiyibiza ngokuba lukholo olusebenza xa ubomi bungasebenzi. >
< start="105.56" dur="3.67"> Kwaye ndacinga ukuba ikhona into efunekayo ngoku, >
< start="109.23" dur="4.75"> Ngaba sidinga ukholo olusebenzayo xa ubomi bungasebenzi. >
< start="113.98" dur="2.86"> Kuba ayisebenzi kakuhle ngoku. >
< start="116.84" dur="2.75"> Ke namhlanje, kule veki, siza kuqala >
< start="119.59" dur="3.25"> uhambo kunye esiya kukukhuthaza >
< start="122.84" dur="1.03"> ngale ngxaki. >
< start="123.87" dur="3.22"> Kwaye andifuni ukuba uphoswe nayiphina imiyalezo. >
< start="127.09" dur="4.1"> Kuba incwadi kaJakobe ngokwenyani igubungela ezili-14 eziphambili >
< start="131.19" dur="4.34"> Iibhloko zokwakha zobomi, 14 imiba ephambili yobomi, >
< start="135.53" dur="3.76"> Iindawo ezili-14 umntu ngamnye kuni >
< start="139.29" dur="1.91"> Sele ukujongana nayo ebomini bakho, >
< start="141.2" dur="3.17"> kwaye uza kujongana nako kwixesha elizayo. >
< start="144.37" dur="3.52"> Umzekelo, kwisahluko sokuqala sikaJames, >
< start="147.89" dur="1.6"> mandikunike umfanekiso nje omncinci wale ncwadi. >
< start="149.49" dur="1.42"> Yizahluko ezine kuphela. >
< start="150.91" dur="2.99"> Isahluko sokuqala, sithetha kuqala malunga nobunzima. >
< start="153.9" dur="1.77"> Kwaye siza kuthetha ngaloo nto namhlanje. >
< start="155.67" dur="4.13"> Yintoni injongo kaThixo ngeengxaki zakho? >
< start="159.8" dur="1.6"> Ke iyathetha ngokhetho. >
< start="161.4" dur="1.62"> Uyenza njani ingqondo yakho? >
< start="163.02" dur="2.085"> Wazi njani ukuba uhlala nini, uza kuhamba nini? >
< start="165.105" dur="2.335"> Uyazi ukuba wenze ntoni, usenza njani izigqibo? >
< start="167.44" dur="2.41"> Kwaye ke iyathetha malunga nesilingo. >
< start="169.85" dur="3.29"> Kwaye siza kujonga ukuba uzahlula njani izilingo eziqhelekileyo >
< start="173.14" dur="3.24"> ebomini bakho ebonakala iqhubeka ikwenza usilele. >
< start="176.38" dur="2.04"> Kwaye ke iyathetha ngesikhokelo. >
< start="178.42" dur="2.68"> Kwaye iyathetha malunga nokuba singasikelelwa njani ngebhayibhile. >
< start="181.1" dur="2.24"> Musa ukuyifunda nje, kodwa usikelelwe ngayo. >
< start="183.34" dur="1.56"> Yiyo yonke kwisahluko sokuqala. >
< start="184.9" dur="2.36"> Kwaye siya kujonga kwezo kwiiveki ezizayo. >
< start="187.26" dur="2.7"> Isahluko sesibini sithetha malunga nobudlelwane. >
< start="189.96" dur="3.06"> Siza kujonga ukuba ubaphatha njani na abantu ngokufanelekileyo. >
< start="193.02" dur="2.628"> Kwaye nabantu kufuneka bahlale ekhaya, >
< start="195.648" dur="4.242"> bonke basekhaya kunye, abantwana kunye nomama nootata, >
< start="199.89" dur="2.32"> kwaye abantu baya kuba kwiikhathaza zabanye. >
< start="202.21" dur="2.74"> Iya kuba ngumyalezo obalulekileyo kubudlelwane. >
< start="204.95" dur="1.39"> Ke iyathetha ngokholo. >
< start="206.34" dur="4.76"> Umthemba njani ngokwenene uThixo xa ungaziva unje? >
< start="211.1" dur="2.18"> kwaye xa izinto zihamba ngendlela engalunganga? >
< start="213.28" dur="1.64"> Yiyo yonke kwisahluko sesibini. >
< start="214.92" dur="3.32"> Isahluko sesithathu, siza kuthetha malunga neengxoxo. >
< start="218.24" dur="1.66"> Amandla encoko. >
< start="219.9" dur="2.12"> Le yeyona ndinyana ibalulekileyo >
< start="222.02" dur="3.73"> Ebhayibhileni, uwulawula njani umlomo wakho? >
< start="225.75" dur="2.25"> Yinto ebalulekileyo nokuba sikuloo ngxaki okanye hayi. >
< start="228" dur="2.27"> Kwaye ke iyathetha malunga nobuhlobo. >
< start="230.27" dur="2.21"> Kwaye isinika ulwazi olusebenzayo >
< start="232.48" dur="2.71"> kwindlela yokwakha ubuhlobo obu bulumko >
< start="235.19" dur="2.7"> kwaye uphephe abahlobo abangalunganga. >
< start="237.89" dur="2.24"> Esi sahluko sesithathu. >
< start="240.13" dur="3.5"> Isahluko sesine siyingxabano. >
< start="243.63" dur="2.39"> Kwaye kwisahluko sesine, sithetha ngayo >
< start="246.02" dur="1.88"> uziphepha njani iimpikiswano >
< start="247.9" dur="1.56"> Kwaye oko kunokuba luncedo ngokwenyani. >
< start="249.46" dur="2.78"> Njengoko kusiya kukhula imbandezelo kunye nokudandatheka, >
< start="252.24" dur="2.94"> njengoko abantu bephelelwe ngumsebenzi, uziphepha njani iimpikiswano? >
< start="255.18" dur="2.03"> Kwaye ke iyathetha ngokugweba abanye. >
< start="257.21" dur="2.74"> Uyeka njani ukudlala uThixo? >
< start="259.95" dur="1.84"> Oko kungadala uxolo oluninzi ebomini bethu >
< start="261.79" dur="1.08"> ukuba singayenza loo nto. >
< start="262.87" dur="1.67"> Kwaye ke iyathetha ngekamva. >
< start="264.54" dur="1.82"> Ucwangcisa njani kwikamva? >
< start="266.36" dur="1.56"> Yiyo yonke kwisahluko sesine. >
< start="267.92" dur="2.75"> Ngoku, kwisahluko sokugqibela, isahluko sesihlanu, bendinixelele >
< start="270.67" dur="0.98"> Kwakukho izahluko ezine, zikhona ngokwenene >
< start="271.65" dur="1.683"> izahluko ezihlanu kuYakobi. >
< start="274.327" dur="2.243"> Siza kuthetha ngemali. >
< start="276.57" dur="3.65"> Kwaye iyathetha malunga nokuba nobulumko kanjani ngobutyebi bakho. >
< start="280.22" dur="1.73"> Kwaye siya kujonga unyamezelo. >
< start="281.95" dur="3.26"> Wenza ntoni xa ulinde kuThixo? >
< start="285.21" dur="1.92"> Elona gumbi linzima ukuhlala kulo >
< start="287.13" dur="3.87"> kwigumbi lokulinda xa ungxamile kwaye ungabi nguThixo. >
< start="291" dur="1.29"> Kwaye emva koko siya kujonga umthandazo, >
< start="292.29" dur="2.07"> ngowuphi umyalezo wokugqibela esiza kuwujonga. >
< start="294.36" dur="1.94"> Uthandaza njani ngeengxaki zakho? >
< start="296.3" dur="2.58"> Ibhayibhile ithi kukho indlela yokuthandaza kunye nokufumana iimpendulo, >
< start="298.88" dur="2.29"> kwaye kukho indlela yokungathandazi. >
< start="301.17" dur="1.27"> Kwaye siza kujonga kuloo nto. >
< start="302.44" dur="3.763"> Ngoku namhlanje, siza kujonga iivesi ezintandathu zokuqala >
< start="306.203" dur="2.072"> kwincwadi kaJames. >
< start="308.275" dur="5"> Ukuba awunayo iBhayibhile, ngoko ndifuna ukuba uyikhuphele >
< start="313.46" dur="3.73"> Kule webhusayithi kuboniswe amanqaku, amanqaku okufundisa, >
< start="317.19" dur="2.02"> kuba zonke iivesi esiya kujonga kuzo >
< start="319.21" dur="2.04"> zikhona kulwandlalo lwakho. >
< start="321.25" dur="3.22"> Isahluko sokuqala, iivesi ezintandathu zokuqala. >
< start="324.47" dur="4.07"> Kwaye iBhayibhile iyithetha le nto xa ithetha ngayo >
< start="328.54" dur="2.33"> ukujongana neengxaki zakho. >
< start="330.87" dur="2.35"> Okokuqala, uYakobi 1: 1 uthi. >
< start="333.22" dur="5"> UYakobi, umkhonzi kaThixo neNkosi uYesu Krestu, >
< start="338.86" dur="4.18"> kwizizwe ezili-12 ezisasazekileyo phakathi kweentlanga, imibuliso. >
< start="343.04" dur="2.23"> Ngoku, ndiyeke kancinci umzuzu apha >
< start="345.27" dur="2.95"> Olu lolona lwaziso lubhekisa phambili >
< start="348.22" dur="1.71"> nayiphi na incwadi esebhayibhileni. >
< start="349.93" dur="2.01"> Kuba uyazi ukuba wayengubani uJames? >
< start="351.94" dur="3.073"> Wayengumntakwabo-Yesu. >
< start="355.013" dur="1.507"> Uthetha ukuthini ngalo nto? >
< start="356.52" dur="2.19"> Kuthetha ukuba wayenguMariya nonyana kaJosefu. >
< start="358.71" dur="2.899"> UYesu wayengunyana kaMariya kuphela. >
< start="361.609" dur="4.591"> Wayengengonyana kaJosefu kuba uThixo wayenguyise kaYesu. >
< start="366.2" dur="2.47"> Kodwa iBhayibhile isixelela ukuba uMariya noYosefu >
< start="368.67" dur="3.52"> saba nabantwana abaninzi kamva, kwaye basinike namagama abo. >
< start="372.19" dur="2.87"> UJames wayengengomKristu. >
< start="375.06" dur="2.27"> Wayengenguye umlandeli kaKristu. >
< start="377.33" dur="3.54"> Wayengakholelwa ukuba umntakwabo-Yesu wayenguMesiya >
< start="380.87" dur="1.78"> ngexesha lobukumkani bukaYesu. >
< start="382.65" dur="1.29"> Wayengakholelwa. >
< start="383.94" dur="3.14"> Kwaye uyakufumanisa ukuba, mzalwana omncinci akakholelwa >
< start="387.08" dur="3.22"> kumzalwana omdala, ke, oko kuyacaca. >
< start="390.3" dur="3.81"> Yintoni eyamenza uYakobi wakholwa kuYesu Krestu? >
< start="394.11" dur="1.56"> Uvuko. >
< start="395.67" dur="4.42"> Xa uYesu ebuyile ekufeni kwaye wajikeleza >
< start="400.09" dur="1.96"> Ziintsuku ezingama-40 uYakobi wambona. >
< start="402.05" dur="3.79"> waba likholwa laza kamva laba yinkokeli >
< start="405.84" dur="2.09"> kwiCawa yaseYerusalem. >
< start="407.93" dur="3.82"> Ke ukuba umntu unelungelo lokuphosa amagama, ngumntu lo. >
< start="411.75" dur="4.06"> Wayengathi, James, mfo wakhula kunye noYesu. >
< start="415.81" dur="2.95"> UYakobi, umntakwabo-Yesu. >
< start="418.76" dur="3.87"> UJames, umhlobo osenyongweni kaYesu ukhula. >
< start="422.63" dur="1.47"> Olo hlobo lwezinto, kodwa alwenzi. >
< start="424.1" dur="2.68"> Utsho nje uYakobi, umkhonzi kaThixo. >
< start="426.78" dur="4.97"> Akasitshiyi isikhundla, akakhuthazi ubungqangi bakhe. >
< start="431.75" dur="2.24"> Kodwa kwivesi yesibini, uqalisa ukungena >
< start="433.99" dur="5"> le yokuqala ukukhupha injongo kaThixo kwiingxaki zakho. >
< start="439.07" dur="1.86"> Makhe ndikufundele. >
< start="440.93" dur="2.41"> Utsho, xa zonke iintlobo zezilingo >
< start="444.2" dur="5"> Isihlwele ebomini bakho, musa ukubacaphukela njengabangeneleli, >
< start="449.52" dur="3.15"> kodwa babamkele njengabahlobo. >
< start="452.67" dur="2.82"> Baqonde ukuba beza kuvavanya ukholo lwakho, >
< start="455.49" dur="4.8"> kunye nokuvelisa ngaphakathi kuwe umgangatho wonyamezelo. >
< start="460.29" dur="4.32"> Kodwa ke loo nkqubo iqhubeke de kube lonyamezelo >
< start="464.61" dur="5"> Uphuhliswe ngokupheleleyo, kwaye uya kuba ngumntu >
< start="470.01" dur="5"> Umlinganiswa okhulileyo kunye nokugcina >
< start="475.11" dur="2.71"> ngaphandle kwamabala obuthathaka. >
< start="477.82" dur="2.24"> Yiyo inguqulelo yePhillips >
< start="480.06" dur="2.73"> kwisahluko sokuqala skaYakobi, iivesi ezimbini ukuya kwesithandathu. >
< start="482.79" dur="3.377"> Ngoku, uthi xa zonke iintlobo zezilingo zingena ebomini bakho >
< start="486.167" dur="2.963"> Kwaye baninzi ebomini bakho, uthe, musa ukubacaphukisa >
< start="489.13" dur="1.69"> njengabangeneleli, bamkeleni njengabahlobo. >
< start="490.82" dur="2.57"> Uthi, uneengxaki, wonwabe. >
< start="493.39" dur="2.09"> Unengxaki, vuya. >
< start="495.48" dur="1.807"> Unengxaki, tshomi. >
< start="499.51" dur="0.87"> Ngoku, ndiyazi ukuba ucinga ntoni. >
< start="500.38" dur="1.94"> Uyahamba, uyandiqhatha? >
< start="502.32" dur="3.15"> Kutheni le nto kufanele ukuba ndonwabe malunga ne-COVID-19? >
< start="505.47" dur="5"> Kutheni le nto kufanele ukuba ndizamkele ezi zilingo ebomini bam? >
< start="510.6" dur="2.31"> Inokwenzeka njani loo nto? >
< start="512.91" dur="3.74"> Isitshixo kule meko yonke yokuzigcina >
< start="516.65" dur="2.85"> isimo sengqondo esifanelekileyo embindini wentlekele >
< start="519.5" dur="3.65"> ligama eli qaphela, ligama eliqondayo. >
< start="523.15" dur="2.19"> Watsho, xa zonke ezi ntlobo zovavanyo >
< start="525.34" dur="2.99"> Isihlwele ebomini bakho, musa ukubacaphukela njengabangeneleli, >
< start="528.33" dur="4.89"> kodwa bamkele njengabahlobo, kwaye uqonde, qaphela, >
< start="533.22" dur="3.75"> beza kuvavanya ukholo lwakho. >
< start="536.97" dur="3.839"> Kwaye ke uyaqhubeka, into aya kuyivelisa ebomini babo. >
< start="540.809" dur="5"> Into ayithethayo apha kukuba yimpumelelo ekuphatheni >
< start="545.99" dur="4.44"> iiveki ezingaphambi kwethu kolu bhubhani lwe-COVID-19 >
< start="550.43" dur="2.87"> kungoku nje kwihlabathi liphela, kwaye nangakumbi nangaphezulu >
< start="553.3" dur="3.11"> Iintlanga ziyavala, kwaye zivalekile >
< start="556.41" dur="2.31"> Iivenkile zokutyela zivale ivenkile, >
< start="558.72" dur="1.89"> bayazivala izikolo, >
< start="560.61" dur="1.57"> kwaye bavala iicawe, >
< start="562.18" dur="1.69"> kwaye bavala nayiphi na indawo >
< start="563.87" dur="3.86"> apho abantu babuthelana khona, kwaye njengalapha e-Orange County, >
< start="567.73" dur="4.29"> apho singavumelekanga ukuba sidibane nabani na kule nyanga. >
< start="572.02" dur="3.75"> Utsho, impumelelo yakho ekusombululeni ezi ngxaki >
< start="575.77" dur="3.49"> Iya kuqonda ngokuqonda kwakho. >
< start="579.26" dur="1.3"> Ngokuqonda kwakho. >
< start="580.56" dur="3.24"> Kwaye ngesimo sakho sengqondo malunga nezo ngxaki. >
< start="583.8" dur="3.69"> Yinto oyaziyo, yile uyaziyo. >
< start="587.49" dur="3.79"> Ngoku, into yokuqala kule ndima ndifuna ukuba uyiqonde >
< start="591.28" dur="3.957"> Ngaba uThixo usinika izikhumbuzo ezine malunga neengxaki. >
< start="595.237" dur="2.253"> Unokufuna ukuyibhala phantsi. >
< start="597.49" dur="2.07"> Izikhumbuzo ezine ngeengxaki ebomini bakho, >
< start="599.56" dur="2.35"> ezibandakanya ingxaki esikuyo ngoku. >
< start="601.91" dur="5"> Inani lokuqala, uthi kuqala, iingxaki azinakugwenywa. >
< start="607.42" dur="2.34"> Iingxaki zinqabile. >
< start="609.76" dur="1.04"> Ngoku, uyithetha njani loo nto? >
< start="610.8" dur="4.33"> Utsho, xa zonke iintlobo zezilingo zisiza. >
< start="615.13" dur="4.41"> Ayitsho ukuba zonke iintlobo zezilingo ziza, utsho ukuba nini. >
< start="619.54" dur="1.72"> Ungathembela kuyo. >
< start="621.26" dur="3.27"> Esi asizulu apho yonke into igqibelele khona. >
< start="624.53" dur="2.66"> Lo nguMhlaba apho yonke into yaphukileyo. >
< start="627.19" dur="2.05"> Kwaye uthi uza kuba neengxaki, >
< start="629.24" dur="3.44"> Uya kuba nobunzima, ungayithemba, >
< start="632.68" dur="2.37"> ungathenga isitokhwe kuyo. >
< start="635.05" dur="2.99"> Ngoku, ayisiyonto ithethwa nguJames yedwa. >
< start="638.04" dur="1.62"> Yonke iBhayibhile iyayithetha. >
< start="639.66" dur="2.77"> UYesu wathi emhlabeni uzakuba nezilingo >
< start="642.43" dur="3.68"> nezilingo, kwaye niya kuba nembandezelo. >
< start="646.11" dur="2.29"> Uthe uza kuba neengxaki ebomini. >
< start="648.4" dur="3.07"> Ke kutheni simangaliswa xa sinengxaki? >
< start="651.47" dur="1.632"> UPeter uthi musa ukumangaliswa >
< start="653.102" dur="2.558"> xa uvavanywa ngomlilo. >
< start="655.66" dur="1.786"> Ndithe musa ukwenza ngathi yinto entsha. >
< start="657.446" dur="2.744"> Wonke umntu uhamba ngamaxesha anzima. >
< start="660.19" dur="2.04"> Ubomi bunzima. >
< start="662.23" dur="2.53"> Oku asizulu, lo nguMhlaba. >
< start="664.76" dur="3.18"> Akukho mntu ukhuselekileyo, akukho mntu uhlala yedwa, >
< start="667.94" dur="2.94"> Akukho mntu uvaliweyo, akukho mntu uxolelwe. >
< start="670.88" dur="1.73"> Uthi uza kuba neengxaki >
< start="672.61" dur="2.78"> kuba ayinakugwenywa. >
< start="675.39" dur="3.84"> Uyazi, ndikhumbula ngenye imini xa ndandikwikholeji. >
< start="679.23" dur="2.27"> Kwiminyaka emininzi edlulileyo, bendidlula >
< start="681.5" dur="1.71"> ngamanye amaxesha anzima kakhulu. >
< start="683.21" dur="3.09"> Ndaye ndaqala ukuthandaza, ndathi, "Thixo, khawundinyamezele." >
< start="686.3" dur="2.91"> Kwaye endaweni yezilingo ukuba ngcono, baba mandundu. >
< start="689.21" dur="2.22"> Ndaze ndathi "Thixo ndiyalufuna unyamezelo," >
< start="691.43" dur="1.72"> iingxaki zaya zisiba mbi. >
< start="693.15" dur="2.43"> Ndaze ndathi "Thixo ndiyalufuna unyamezelo," >
< start="695.58" dur="2.93"> baya besiba mbi ngakumbi. >
< start="698.51" dur="1.77"> Kwenzeka ntoni? >
< start="700.28" dur="1.82"> Ewe, ekugqibeleni ndiye ndaqonda ukuba emva kweenyanga ezintandathu, >
< start="702.1" dur="2.64"> Bendinomonde ngakumbi kunasekuqalekeni kwam, >
< start="704.74" dur="2.07"> yindlela uThixo awayendifundisa ngayo ngomonde >
< start="706.81" dur="3.2"> Kwakungobo bunzima. >
< start="710.01" dur="2.85"> Ngoku, iingxaki azizizo ezinye izifundo zonyulo >
< start="712.86" dur="2.44"> ukhetho onokuthi uluthathe ebomini. >
< start="715.3" dur="2.863"> Hayi, ziyafuneka, awunakuphuma kuzo. >
< start="719.01" dur="3.71"> Ukuze uphumelele kwisikolo sobomi, >
< start="722.72" dur="1.96"> uza kuhamba ngesikolo sokunkqonkqoza okunzima. >
< start="724.68" dur="2.87"> Uza kuba neengxaki, azinakugwenywa. >
< start="727.55" dur="1.35"> Yile nto ithethwa yiBhayibhile. >
< start="728.9" dur="2.43"> Okwesibini into ethethwa yiBhayibhile ngeengxaki yile. >
< start="731.33" dur="3.923"> Iingxaki ziyahluka, oko kuthetha ukuba azifani zonke. >
< start="735.253" dur="2.817"> Awufumani ngxaki efanayo enye emva kwenye. >
< start="738.07" dur="1.89"> Ufumana ezininzi ezahlukeneyo. >
< start="739.96" dur="2.11"> Awufumani nje kuphela 'em, kodwa ufumana ezahlukeneyo. >
< start="742.07" dur="5"> Utsho xa ulinga, xa uneengxaki zalo lonke uhlobo. >
< start="748.25" dur="2.09"> Ungayirhangqa loo nto ukuba uthatha amanqaku. >
< start="750.34" dur="3.54"> Xa zonke iintlobo zezilingo zingena ebomini bakho. >
< start="753.88" dur="3.25"> Uyazi, ndingumyezo yegadi, kwaye ndakhe ndenza isifundo, >
< start="757.13" dur="2.32"> kwaye ndafumanisa ukuba urhulumente olapha >
< start="759.45" dur="2.18"> eUnited States yahlelwa >
< start="761.63" dur="3.493"> I-205 iintlobo ezahlukeneyo zokhula. >
< start="765.123" dur="4.767"> Ndicinga ukuba i-80% yazo ikhula egadini yam. (ehleka) >
< start="769.89" dur="2.52"> Ndihlala ndicinga ukuba xa ndikhulisa imifuno, >
< start="772.41" dur="2.85"> Kuya kufuneka ndihlawulise ukwamkelwa kwiFama iWarren's Weed. >
< start="775.26" dur="3.62"> Kodwa zininzi iintlobo zokhula, >
< start="778.88" dur="1.82"> Kwaye kukho iintlobo ezininzi zezilingo, >
< start="780.7" dur="1.76"> zininzi iintlobo zeengxaki. >
< start="782.46" dur="2.282"> Baza ngobukhulu bonke, beza yonke imilo. >
< start="784.742" dur="2.898"> Kukho ngaphezu kwe-flavour ezingama-31. >
< start="787.64" dur="2.75"> Eli gama apha, zonke iintlobo, apho lithetha khona >
< start="790.39" dur="1.55"> zonke iintlobo zolingo ebomini bakho, >
< start="791.94" dur="4.26"> ngokwenyani kwisiGrike sithetha ngeendlela ezininzi. >
< start="796.2" dur="2.795"> Ngamanye amagama, zininzi izithunzi zoxinzelelo >
< start="798.995" dur="2.205"> ebomini bakho, ungavuma oko? >
< start="801.2" dur="1.9"> Zininzi izithunzi zoxinzelelo. >
< start="803.1" dur="1.62"> Zonke azingafani. >
< start="804.72" dur="2.67"> Kukho uxinzelelo lwezezimali, kukho uxinzelelo lobuhlobo, >
< start="807.39" dur="2.37"> kukho uxinzelelo lwempilo, kukho uxinzelelo lomzimba, >
< start="809.76" dur="1.62"> kukho uxinzelelo lwexesha. >
< start="811.38" dur="5"> Utsho ukuba yonke imibala eyahlukileyo. >
< start="816.41" dur="2.82"> Kodwa ukuba uphuma kwaye uyothenga imoto kwaye uyafuna >
< start="819.23" dur="3.44"> umbala wesiko, ke kuya kufuneka ulinde. >
< start="822.67" dur="2.98"> Kwaye emva kokuba yenziwe, emva koko ufumana umbala wakho wesiko. >
< start="825.65" dur="2.01"> Ngokwenyani ligama elisetyenziswe apha. >
< start="827.66" dur="4.99"> Ngumbala wesiko, izilingo ezixubileyo ebomini bakho. >
< start="832.65" dur="2.14"> UThixo ubavumela ngenxa yesizathu. >
< start="834.79" dur="3.07"> Ezinye zeengxaki zakho zenziwa ngokwezifiso. >
< start="837.86" dur="1.842"> Abanye babo sinamava nje sonke, >
< start="839.702" dur="2.908"> njengale, COVID-19. >
< start="842.61" dur="1.95"> Kodwa yena uthi iingxaki ziyahluka. >
< start="844.56" dur="2.845"> Kwaye into endithetha ngayo yile kukuba bayahluka kubungakanani. >
< start="847.405" dur="3.143"> Ngamanye amagama, banzima kangakanani. >
< start="850.548" dur="3.792"> Ziyahluka rhoqo, kwaye kunjalo. >
< start="854.34" dur="1.421"> Asazi ukuba le nto izokuhlala ixesha elingakanani. >
< start="855.761" dur="2.699"> Asazi ukuba kunzima kangakanani. >
< start="858.46" dur="2.197"> Ndibone umqondiso ngenye imini owathi, >
< start="860.657" dur="3.98"> Yonke imvula kufuneka ingene ebomini >
< start="864.637" dur="2.743"> "kodwa iyahlekisa." (ehleka) >
< start="867.38" dur="1.9"> Kwaye ndicinga ukuba injalo indlela >
< start="869.28" dur="1.77"> abantu abaninzi baziva ngoku. >
< start="871.05" dur="1.92"> Iyahlekisa. >
< start="872.97" dur="3.07"> Iingxaki zinqabile kwaye ziyahluka. >
< start="876.04" dur="2.86"> Izinto zesithathu azithethayo uYakobi ukuze singothuki >
< start="878.9" dur="2.87"> Iingxaki azingalindeleki. >
< start="881.77" dur="1.6"> Azilindeleki. >
< start="883.37" dur="4.01"> Utsho xa izilingo zininzi ebomini bakho, >
< start="887.38" dur="2.05"> Ukuba uthatha iinowuthi, jikeleza eli binzana. >
< start="889.43" dur="3.13"> Ziyahlangana ebomini bakho. >
< start="892.56" dur="3.28"> Bona, akukho ngxaki ivelayo xa uyifuna >
< start="895.84" dur="1.6"> okanye xa ungayifuni. >
< start="897.44" dur="1.97"> Iza nje xa ifuna ukuza. >
< start="899.41" dur="1.97"> Inxalenye yesizathu kukuba yingxaki. >
< start="901.38" dur="3.05"> Iingxaki ziza ngexesha elililo. >
< start="904.43" dur="1.582"> Ngaba wakhe waziva njengengxaki >
< start="906.012" dur="2.778"> ungene ebomini bakho, uyahamba, hayi ngoku. >
< start="908.79" dur="2.51"> Ngokwenyani, njengangoku? >
< start="911.3" dur="3.82"> Apha kwiCawa yaseSaddleback, besikwiphulo elikhulu >
< start="915.12" dur="2.45"> ukuphupha ngekamva. >
< start="917.57" dur="3.27"> Kwaye ngequbuliso ikhithi ye-coronavirus. >
< start="920.84" dur="2.06"> Kwaye ndiyahamba, hayi ngoku. >
< start="922.9" dur="1.673"> (chuckles) Hayi ngoku. >
< start="926.75" dur="3.073"> Ngaba ukhe wawunayo itayara eflatini xa wawusele ufike kade? >
< start="931.729" dur="2.361"> Awufumani tayara yasesicaba xa unexesha elininzi. >
< start="934.09" dur="1.823"> Ungxamile ukuya kwindawo ethile. >
< start="937.12" dur="4.08"> Kufana neentsana zomntwana kwingubo yakho entsha >
< start="941.2" dur="4.952"> njengokuba usiya kutyelelo olubalulekileyo lwangokuhlwa. >
< start="946.152" dur="2.918"> Okanye wahlulahlula ibhulukhwe yakho ngaphambi kokuba uthethe. >
< start="949.07" dur="2.55"> Ngokwenyani yenzekile kum ngexesha elinye >
< start="951.62" dur="1.713"> ngeCawa kudala. >
< start="956" dur="4.64"> Abanye abantu, abanamonde, >
< start="960.64" dur="1.77"> abanakulinda umnyango ovukayo. >
< start="962.41" dur="1.72"> Banokufumana nje, kufuneka benze, >
< start="964.13" dur="2.38"> Bafanele ukuyenza ngoku, kufuneka bayenze ngoku. >
< start="966.51" dur="3.99"> Ndikhumbula iminyaka emininzi eyadlulayo bendiseJapan, >
< start="970.5" dur="3.34"> kwaye bendimi ecaleni kwendlela ephantsi komhlaba elinde indlela engaphantsi >
< start="973.84" dur="2.55"> ukufika, nokuvula kwayo, namasango avulekile, >
< start="976.39" dur="3.33"> nendoda yaseJapan ngoko nangoko >
< start="979.72" dur="4.49"> Ndihlambe kum njengoko bendimi apho. >
< start="984.21" dur="5"> Kwaye ndacinga, kutheni nam, kutheni ngoku? >
< start="989.9" dur="3.583"> Azilindelekanga, ziyeza xa ungazifuni. >
< start="994.47" dur="2.94"> Awunakuzichaza kwangaphambili iingxaki ebomini bakho. >
< start="997.41" dur="3.69"> Ngoku qaphela, ithi xa zonke iintlobo zezilingo, nini, >
< start="1001.1" dur="3"> azinakugwenywa, zonke iintlobo, ziyahluka, >
< start="1004.1" dur="3.98"> isihlwele ebomini bakho, ukuba abahlelekanga, >
< start="1008.08" dur="3.213"> uthi musa ukubacaphukela njengabangeneleli. >
< start="1012.19" dur="1.01"> Uthini apha? >
< start="1013.2" dur="2.16"> Ewe, ndiza kukuchaza ngakumbi ngokweenkcukacha. >
< start="1015.36" dur="2.6"> Kodwa nantsi into yesine ethi iBhayibhile ngeengxaki. >
< start="1017.96" dur="2.553"> Iingxaki zinenjongo. >
< start="1021.4" dur="2.69"> Iingxaki zinenjongo. >
< start="1024.09" dur="3.07"> UThixo unenjongo kuyo yonke into. >
< start="1027.16" dur="2.72"> Nezinto ezimbi ezenzekayo ebomini bethu, >
< start="1029.88" dur="2.16"> Unokukhupha okulungileyo kubo. >
< start="1032.04" dur="1.64"> UThixo akanyanzelekanga ukuba abangele yonke ingxaki. >
< start="1033.68" dur="2.62"> Uninzi lweengxaki esizibangela zona. >
< start="1036.3" dur="2.1"> Abantu bathi, kutheni abantu begula? >
< start="1038.4" dur="3.69"> Ewe, esinye isizathu kukuba asenzi into athi masiyenze. >
< start="1042.09" dur="3.02"> Ukuba sitye oko uThixo asiyalela kona, >
< start="1045.11" dur="2.71"> ukuba silele njengoThixo usixelela ukuba siphumle, >
< start="1047.82" dur="3.28"> Ukuba siyazilolonga ngokwendlela esixelelwa nguThixo ukuba sizilolonge ngayo, >
< start="1051.1" dur="3.16"> ukuba asivumelanga iimvakalelo ezimbi kubomi bethu >
< start="1054.26" dur="2.06"> NjengoThixo uxela, ukuba sithobela uThixo, >
< start="1056.32" dur="2.65"> ngekhe sibanazo uninzi lweengxaki zethu. >
< start="1058.97" dur="3.07"> Izifundo zibonise ukuba malunga ne-80% yeengxaki zempilo >
< start="1062.04" dur="3.57"> kweli lizwe, eMelika, kubangelwa yile nto kuthiwa >
< start="1065.61" dur="3"> iindlela zokuphila ezingapheliyo. >
< start="1068.61" dur="3.05"> Ngamanye amagama, asenzi into elungileyo. >
< start="1071.66" dur="1.14"> Asenzi into esempilweni. >
< start="1072.8" dur="2.66"> Sisoloko sisenza into ezenzakalisayo. >
< start="1075.46" dur="2.58"> Kodwa le nto ayithethayo ilapha, iingxaki zinenjongo. >
< start="1078.04" dur="3.53"> Utsho xa udibana neengxaki. >
< start="1081.57" dur="3.46"> qaphela ukuba beza kuvelisa. >
< start="1085.03" dur="3.56"> Yenza isangqa kula mabinzana, eza kuvelisa. >
< start="1088.59" dur="3.22"> Iingxaki zinokuba nemveliso. >
< start="1091.81" dur="2.23"> Ngoku, abavelisi ngokuzenzekelayo. >
< start="1094.04" dur="3.06"> Le ntsholongwane ye-COVID, ukuba andiphenduli ngomhla olungileyo, >
< start="1097.1" dur="3.35"> ayizukuvelisa nto intle ebomini bam. >
< start="1100.45" dur="2.17"> Kodwa ukuba ndaphendula ngendlela eyiyo. >
< start="1102.62" dur="2.25"> zezona zinto zimbi kakhulu ebomini bam >
< start="1104.87" dur="3.89"> Unokuvelisa ukukhula kunye nokuxhamla kunye nentsikelelo, >
< start="1108.76" dur="2.23"> ebomini bakho nasebomini bam. >
< start="1110.99" dur="2.26"> Beza ukuvelisa. >
< start="1113.25" dur="4.59"> Utsho apha ukuba ukubandezeleka noxinzelelo >
< start="1117.84" dur="5"> kunye nosizi, ewe, kwaye nokugula kunokuphumeza okuthile >
< start="1123.42" dur="2.913"> ixabiso ukuba siyayivumela. >
< start="1127.363" dur="3.887"> Konke kukhetho lwethu, konke kukwimo yethu. >
< start="1131.25" dur="4.043"> UThixo usebenzisa ubunzima kubomi bethu. >
< start="1136.9" dur="2.33"> Uthi, kuhle, uyenza njani loo nto? >
< start="1139.23" dur="4.04"> UThixo ubusebenzisa njani ubunzima kunye neengxaki kubomi bethu? >
< start="1143.27" dur="3.29"> Kulungile, enkosi ngokubuza, kuba indinyana elandelayo >
< start="1146.56" dur="1.75"> okanye kwinxalenye elandelayo yeendinyana zitsho >
< start="1148.31" dur="2.61"> ukuba uThixo uzisebenzise ngeendlela ezintathu. >
< start="1150.92" dur="3.09"> Iindlela ezintathu, uThixo usebenzisa iingxaki ebomini bakho ngeendlela ezintathu. >
< start="1154.01" dur="4.18"> Okokuqala, iingxaki kuvavanya ukholo lwam. >
< start="1158.19" dur="2.03"> Ngoku, ukholo lwakho lufana nesihlunu. >
< start="1160.22" dur="3.8"> Umsipha awunakomelela ngaphandle kokuba uvavanyiwe, >
< start="1164.02" dur="3.3"> Ngaphandle kokuba yoluliwe, ngaphandle kokuba ibekwe phantsi koxinzelelo. >
< start="1167.32" dur="4.99"> Awukhulisi izihlunu ezomeleleyo ngokungenzi nto. >
< start="1172.31" dur="3.09"> Uhlakulela izihlunu ezomeleleyo ngokuzolula >
< start="1175.4" dur="2.53"> kwaye ubomeleza kwaye ubavavanye >
< start="1177.93" dur="2.7"> kwaye uzityhalele kude kube sekupheleni. >
< start="1180.63" dur="5"> Ke yena uthi iingxaki zeza kuvavanya ukholo lwam. >
< start="1185.88" dur="4.38"> Uthi qaphela ukuba beza kuvavanya ukholo lwakho. >
< start="1190.26" dur="3.28"> Ngoku, olo vavanyo lwegama khona apho, lelo lixesha >
< start="1193.54" dur="5"> Ngamaxesha okubhalwa kwebhayibhile oko kwakusetyenziselwa ukucoca izinyithi. >
< start="1198.61" dur="3.05"> Kwaye into obuya kuyenza ukuba ungathatha isinyithi exabisekileyo >
< start="1201.66" dur="1.768"> isilivere okanye igolide, okanye enye into, >
< start="1203.428" dur="2.932"> kwaye ubuyayibeka embizeni enkulu, kwaye uya kuyitshisa >
< start="1206.36" dur="2.54"> kumaqondo obushushu aphezulu kakhulu, kutheni? >
< start="1208.9" dur="1.17"> Kumaqondo obushushu aphezulu, >
< start="1210.07" dur="3.34"> zonke izinto ezingcolileyo zitshisiwe. >
< start="1213.41" dur="4.05"> Kwaye eyona nto iseleyo yigolide ecocekileyo >
< start="1217.46" dur="1.946"> isilivere ecocekileyo. >
< start="1219.406" dur="3.164"> Ligama lesiGrike apha lokuvavanywa. >
< start="1222.57" dur="4.54"> Ngumlilo wokucoca xa uThixo ebeka ubushushu >
< start="1227.11" dur="1.705"> kwaye ivumela oko kubomi bethu, >
< start="1228.815" dur="3.345"> itshisa izinto ezingabalulekanga. >
< start="1232.16" dur="2.94"> Uyayazi into eza kwenzeka kwiiveki ezimbalwa ezilandelayo? >
< start="1235.1" dur="2.134"> Into emnandi ukuba sonke besicinga ukuba ibaluleke ngokwenene, >
< start="1237.234" dur="1.726"> sizakuqonda, hmm, ndidibene >
< start="1238.96" dur="1.273"> kulungile ngaphandle kwalonto. >
< start="1241.1" dur="2.51"> Kuya kuhlengahlengisa izinto eziphambili ngokubaluleka, >
< start="1243.61" dur="2.41"> kuba izinto zizokutshintsha. >
< start="1246.02" dur="4.22"> Ngoku, imizekelo yendlela yokuvavanya ukholo lwakho >
< start="1251.17" dur="4.02"> Ngaba amabali athetha ngoYobhi osebhayibhileni. >
< start="1255.19" dur="1.75"> Kukho incwadi epheleleyo ngoYobhi. >
< start="1256.94" dur="3.49"> Uyazi, uYobhi wayengoyena mntu wayesisityebi kunabo bonke eBhayibhileni, >
< start="1260.43" dur="2.74"> kwaye ngosuku olunye, waphulukana nayo yonke into. >
< start="1263.17" dur="2.82"> Waphulukana nosapho lonke, waphulukana nobutyebi bakhe, >
< start="1265.99" dur="3.97"> Ulahlekelwe ngabahlobo bakhe bonke, Abagrogrisi bahlasela usapho lwakhe, >
< start="1269.96" dur="4.567"> waba nesifo esinganyangekiyo, esibuhlungu kakhulu >
< start="1276.283" dur="3.437"> ebenganyangeki. >
< start="1279.72" dur="1.323"> Kulungile, uyisiphelo. >
< start="1282.109" dur="3.721"> Kwaye ke uThixo wayevavanya ukholo lwayo. >
< start="1285.83" dur="3.27"> Kwaye uThixo kamva uyibuyisela inyani kabini >
< start="1289.1" dur="3.423"> oko wayenako ngaphambi kokuba aye kuvavanyo olukhulu. >
< start="1293.59" dur="2.82"> Ngamaxesha athile ndiye ndafunda isicatshulwa kwindawo ethile kwakudala >
< start="1296.41" dur="2.92"> bathi abantu banjengeebhegi zeti. >
< start="1299.33" dur="1.34"> Awuyazi ngokuqinisekileyo into eku-em >
< start="1300.67" dur="2.67"> ude uyeke emanzini ashushu. >
< start="1303.34" dur="3.09"> Kwaye emva koko uyakubona okungaphakathi kubo. >
< start="1306.43" dur="2.77"> Ngaba ukhe wawunalo olunye lwale mihla ishushu yamanzi? >
< start="1309.2" dur="3.763"> Wakhe wakhetha enye yeeveki ezishushu okanye iinyanga? >
< start="1313.82" dur="3.78"> Sikwimeko enamanzi ashushu ngoku. >
< start="1317.6" dur="2.41"> Kwaye into eza kuphuma kuwe yeyona nto ingaphakathi kuwe. >
< start="1320.01" dur="1.33"> Ingathi izinyo. >
< start="1321.34" dur="4.15"> Ukuba ndinombhobho wamazinyo kwaye ndiyawushukumisa, >
< start="1325.49" dur="1.18"> yintoni eza kuphuma? >
< start="1326.67" dur="0.9"> Utsho, kuhle, izinyo. >
< start="1327.57" dur="1.65"> Hayi, akanyanzelekanga. >
< start="1329.22" dur="1.95"> Ibingathetha izinyo ngaphandle, >
< start="1331.17" dur="1.67"> kodwa inokuba ne-marinara sauce >
< start="1332.84" dur="2.6"> okanye ibhotolo yamandongomane okanye imayonesi ngaphakathi. >
< start="1335.44" dur="2.92"> Yintoni eza kuphuma xa ibekwa phantsi koxinzelelo >
< start="1338.36" dur="1.403"> nayiphi na into ekuyo. >
< start="1341.13" dur="3.603"> Kwaye kwiintsuku ezizayo njengoko ujongene nentsholongwane ye-COVID, >
< start="1346.266" dur="2.224"> into eza kuphuma kuwe yeyona nto ingaphakathi kuwe. >
< start="1348.49" dur="2.24"> Kwaye ukuba ugcwele ubukrakra, oko kuya kuphuma. >
< start="1350.73" dur="2.23"> Kwaye ukuba ugcwele kukudandatheka, oko kuya kuphuma. >
< start="1352.96" dur="3.79"> Kwaye ukuba ugcwele ngumsindo okanye unxunguphalo okanye unetyala >
< start="1356.75" dur="3.46"> okanye ihlazo okanye ukungazithembi, oko kuya kuphuma. >
< start="1360.21" dur="4"> Ukuba ugcwele luloyiko kukuba, nantoni na engaphakathi kuwe >
< start="1364.21" dur="3.52"> yintoni eza kuphuma xa uxinzelelo lubekwa kuwe. >
< start="1367.73" dur="1.44"> Kwaye yile nto ayithethayo apha, >
< start="1369.17" dur="2.23"> Iingxaki zivavanya ukholo lwam. >
< start="1371.4" dur="5"> Uyazi, kwiminyaka eyadlulayo, ndadibana nendoda endala ngokwenene >
< start="1376.98" dur="3.23"> kwinkomfa iminyaka emininzi edlulileyo eMpuma. >
< start="1380.21" dur="1.74"> Ndicinga ukuba yayiyiTennessee. >
< start="1381.95" dur="3.91"> Kwaye yena, lo mfo mdala undixelele indlela ezahlukanisayo >
< start="1387.13" dur="4.8"> esona sibonelelo sikhulu ebomini bakhe. >
< start="1391.93" dur="2.017"> Ndathi, "Kulungile, ndifuna ukuva eli bali. >
< start="1393.947" dur="1.523"> "Ndixelele yonke into ngayo." >
< start="1395.47" dur="1.67"> Kwaye yayiyintoni na ukuba usebenzile >
< start="1397.14" dur="2.823"> ekubumbeni ngamaplanga ubomi bakhe bonke. >
< start="1400.83" dur="2.41"> Wayesisibambiso ubomi bakhe bonke. >
< start="1403.24" dur="3.34"> Kodwa ngenye imini ngexesha lokudodobala kwezoqoqosho, >
< start="1406.58" dur="3.607"> wangena umphathi wakhe, wathi kuye, "Ugxothiwe." >
< start="1411.19" dur="3.54"> Kwaye bonke ubungcali bakhe baphuma ngomnyango. >
< start="1414.73" dur="4.62"> Wayetshatile eneminyaka engama-40 enomfazi >
< start="1419.35" dur="3.85"> nosapho kwaye alikho elinye ithuba lomsebenzi elijikeleze yena, >
< start="1423.2" dur="2.923"> kwaye kwabakho ukuwohloka kwempahla okwenzeka ngelo xesha. >
< start="1427.03" dur="3.5"> Kwaye wayedimazekile, kwaye esoyika. >
< start="1430.53" dur="1.77"> Abanye bakho banokuziva njalo ngoku. >
< start="1432.3" dur="1.58"> Usenokuba sele ulahliwe. >
< start="1433.88" dur="1.76"> Mhlawumbi woyika ukuba uya kuba >
< start="1435.64" dur="2.63"> Ebekwe phantsi kwale ngxaki. >
< start="1438.27" dur="2.45"> Kwaye wayenomvandedwa, wayenoloyiko. >
< start="1440.72" dur="1.827"> Uthe, ndibhale phantsi, wathi, "Ndivile ngathi >
< start="1442.547" dur="3.97"> "ilizwe lam lavela lusuku lokugxothwa kwam. >
< start="1446.517" dur="2.2"> Kodwa xa ndagodukayo, ndaxelela umfazi wam okwenzekileyo, >
< start="1448.717" dur="3.57"> Wabuza, "Wenza ntoni ngoku?" >
< start="1452.287" dur="2.98"> "Ndathi, kulungile ke emva kokuba ndigxothiwe, >
< start="1455.267" dur="3.9"> Ndiza kwenza into ebendisoloko ndifuna ukuyenza. >
< start="1459.167" dur="1.84"> "Yiba ngumakhi. >
< start="1461.007" dur="1.61"> "Ndiza kubambisa indlu yethu >
< start="1462.617" dur="2.413"> "ndiza kungena kwishishini lokwakha." >
< start="1465.03" dur="2.887"> Kwaye wandixelela, "Uyazi, Rick, iphulo lam lokuqala >
< start="1467.917" dur="4.13"> "yayilokwakha iimoto ezimbini ezincinci." >
< start="1472.965" dur="2.115"> Yile nto ayenzileyo. >
< start="1475.08" dur="4.267"> Kodwa wathi, "Kwiminyaka emihlanu, bendisisigidigidi." >
< start="1480.21" dur="2.99"> Igama lale ndoda, indoda ebendithetha kuyo, >
< start="1483.2" dur="3.5"> yayinguWallace Johnson, kunye neshishini elaliqalayo >
< start="1486.7" dur="4.39"> emva kokugxothwa wabizwa ngokuba yiHolide zeIholide. >
< start="1491.09" dur="1.44"> Iiholide zeIholide. >
< start="1492.53" dur="2.877"> UWallace wandixelela, "URick, namhlanje, ukuba ndingabinakho >
< start="1495.407" dur="3.13"> Indoda endigxothileyo, ndingathanda ngokunyaniseka >
< start="1498.537" dur="2.143"> "enkosi ngento ayenzileyo." >
< start="1500.68" dur="2.56"> Ngela xesha kwenzeka ngalo, andizange ndiqonde >
< start="1503.24" dur="2.83"> kutheni ndigxothiwe, kutheni ndigxothiwe nje. >
< start="1506.07" dur="3.94"> Kodwa kamva kuphela ndabona ukuba yayingenanto kaThixo >
< start="1510.01" dur="4.483"> kunye nesicwangciso esimangalisayo sokundifaka kum umsebenzi wokukhetha kwakhe. >
< start="1515.76" dur="3.05"> Iingxaki zinenjongo. >
< start="1518.81" dur="1.17"> Banenjongo. >
< start="1519.98" dur="4.18"> Baqonde ukuba beza kuvelisa, kwaye yenye yezinto zokuqala >
< start="1524.16" dur="3.984"> bavelisa ukholo olukhulu ngakumbi, bayavavanya ukholo lwakho. >
< start="1528.144" dur="3.226"> Inombolo yesibini, nantsi inzuzo yesibini yesibini yeengxaki. >
< start="1531.37" dur="3.27"> Iingxaki zikhulisa unyamezelo lwam. >
< start="1534.64" dur="1.52"> Bayakhulisa unyamezelo lwam. >
< start="1536.16" dur="2.23"> Le yinxalenye elandelayo yebinzana, utsho >
< start="1538.39" dur="5"> ezi ngxaki ziza kukuhlakulela unyamezelo. >
< start="1543.45" dur="2.33"> Bakhulisa unyamezelo ebomini bakho. >
< start="1545.78" dur="1.91"> Zithini iziphumo zeengxaki ebomini bakho? >
< start="1547.69" dur="1.52"> Ukuhlala amandla. >
< start="1549.21" dur="2.82"> Kukukwenyani amandla okujongana noxinzelelo. >
< start="1552.03" dur="2.253"> Namhlanje sikubiza ngokuba ngumonde. >
< start="1555.12" dur="1.79"> Ukukwazi ukuphinda ubuye umva. >
< start="1556.91" dur="3.197"> Kwaye lolona phawu lubalaseleyo ekufuneka umntwana afunde >
< start="1560.107" dur="3.473"> kwaye wonke umntu omdala kufuneka afunde ukuzomeleza. >
< start="1563.58" dur="2.92"> Kuba wonke umntu uyawa, wonke umntu ukhubeka. >
< start="1566.5" dur="2.05"> Wonke umntu uhamba ngamaxesha anzima, >
< start="1568.55" dur="3.31"> Wonke umntu uyagula ngamaxesha ahlukeneyo. >
< start="1571.86" dur="2.39"> Wonke umntu unokusilela ebomini bakhe. >
< start="1574.25" dur="2.7"> Yindlela ojongana ngayo noxinzelelo. >
< start="1576.95" dur="3.613"> Unyamezelo, uyaqhubeka nokuqhubeka nokuxhoma. >
< start="1581.52" dur="1.99"> Ewe, ufunda njani ukwenza oko? >
< start="1583.51" dur="3.53"> Ufunda njani ukujongana noxinzelelo? >
< start="1587.04" dur="2.28"> Ngamava, yeyona ndlela kuphela. >
< start="1589.32" dur="4.93"> Awufundi ukujongana noxinzelelo kwincwadi ebhaliweyo. >
< start="1594.25" dur="4.02"> Awufundi ukuba ungaphatha njani uxinzelelo kwisemina. >
< start="1598.27" dur="3.76"> Ufunda ukujongana noxinzelelo ngokubekwa phantsi koxinzelelo. >
< start="1602.03" dur="2.53"> Kwaye awuyazi into ekuwe >
< start="1604.56" dur="3.063"> ude ube ubekwe kuloo meko. >
< start="1609.77" dur="2.7"> Kunyaka wesibini weCawa yaseSaddleback, ngo-1981, >
< start="1612.47" dur="1.36"> Ndidlule kwixesha lokudakumba >
< start="1613.83" dur="2.823"> apho veki nganye bendifuna ukurhoxa. >
< start="1617.64" dur="3.88"> Kwaye bendifuna ukuyeka yonke intsasa yangeCawa. >
< start="1621.52" dur="3.14"> Kodwa, bendingenaxesha elinzima ebomini bam, >
< start="1624.66" dur="2.3"> kwaye okwangoku ndibeka inyawo elinye ngaphambi kwelinye >
< start="1626.96" dur="3.19"> njengoThixo, musa ukuba ndakhe ibandla elikhulu, >
< start="1630.15" dur="1.973"> kodwa Thixo, ndiphumelele kule veki. >
< start="1633.01" dur="2.1"> Kwaye andizukuyeka. >
< start="1635.11" dur="2.22"> Ndonwabile ukuba andiyekanga. >
< start="1637.33" dur="3.09"> Kodwa ndivuya kakhulu kuba uThixo engazange andincame. >
< start="1640.42" dur="1.46"> Kuba olo yayiluvavanyo. >
< start="1641.88" dur="5"> Kwaye kuloo nyaka wokuvavanywa, ndakhula ngokomoya >
< start="1647.51" dur="3.56"> kunye nobudlelwane kunye neemvakalelo kunye namandla engqondo >
< start="1651.07" dur="4.28"> lonto yandivumela iminyaka kamva ukujikisa zonke iintlobo zebhola >
< start="1655.35" dur="4.64"> kunye nokusingatha isixa esikhulu soxinzelelo emehlweni oluntu >
< start="1659.99" dur="2.01"> kuba ndiye ndadlula kuloo nyaka >
< start="1662" dur="3.363"> Ubunzima obucekeceke ngaphandle, omnye emva komnye. >
< start="1666.51" dur="5"> Uyazi, iMelika yayinothando lokuthandana ngokulula. >
< start="1672.57" dur="2.113"> Siyakuthanda ukusebenziseka lula. >
< start="1675.593" dur="3.187"> Ngeentsuku kunye neeveki ezizayo kule ngxaki, >
< start="1678.78" dur="2.58"> kukho izinto ezininzi ezingalunganga. >
< start="1681.36" dur="1.13"> Okungalunganga. >
< start="1682.49" dur="2.95"> Kwaye siza kwenza ntoni ngathi >
< start="1685.44" dur="2.503"> xa yonke into ingonwabanga, >
< start="1688.96" dur="2.52"> xa kufuneka uqhubeke nje >
< start="1691.48" dur="2.1"> xa ungaziva ufuna ukuqhubeka. >
< start="1693.58" dur="5"> Uyazi, usukelo lomnxantathu okanye injongo yomtshato >
< start="1698.71" dur="3.1"> ayisi malunga nesantya, ukuba ufike ngokukhawuleza kangakanani apho, >
< start="1701.81" dur="1.86"> kungakumbi ngonyamezelo. >
< start="1703.67" dur="2.34"> Ngaba uyawugqiba ugqatso? >
< start="1706.01" dur="2.43"> Ululungiselela njani olo hlobo lwezinto? >
< start="1708.44" dur="2.13"> Ngokudlula kubo. >
< start="1710.57" dur="3.487"> Ke xa usoluliwe kwiintsuku ezizayo, >
< start="1714.057" dur="2.213"> ungazikhathazi ngayo, ungazikhathazi ngayo. >
< start="1716.27" dur="3.02"> Iingxaki zikhulisa unyamezelo lwam. >
< start="1719.29" dur="3.21"> Iingxaki zinenjongo, zinenjongo. >
< start="1722.5" dur="2.6"> Into yesithathu asixelela yona uJames ngeengxaki >
< start="1725.1" dur="3.68"> sidlula apha kukuba iingxaki zivuthisa isimilo sam. >
< start="1728.78" dur="3.68"> Kwaye ukutsho oku kwivesi yesine ka-Yahluko wokuqala. >
< start="1732.46" dur="4.18"> Utsho kodwa, le nkqubo iqhubeke >
< start="1736.64" dur="4.49"> ude ube ngabantu abanobuntu obuqolileyo >
< start="1741.13" dur="3.663"> kunye nengqibelelo engenabala obuthathaka. >
< start="1746.3" dur="1.32"> Ngaba awungethandi ukuba nayo? >
< start="1747.62" dur="2.42"> Ngaba ungathanda ukuva abantu besithi, uyazi, >
< start="1750.04" dur="3.32"> loo mfazi akanabala abuthathaka kwisimo sakhe. >
< start="1753.36" dur="4.53"> Indoda, loo mfo ayinabala abuthathaka kwisimo sayo. >
< start="1757.89" dur="3.04"> Ulufumana njani olo hlobo lomlinganiswa oqolileyo? >
< start="1760.93" dur="4.58"> Inkqubo iqhubeke de ube ngabantu, >
< start="1765.51" dur="3.38"> amadoda nabafazi, benempawu ezivuthiweyo >
< start="1768.89" dur="3.33"> kunye nengqibelelo engenabala obuthathaka. >
< start="1772.22" dur="2.6"> Uyazi, bekukho uphando oludumileyo olwenziwe uninzi, >
< start="1774.82" dur="4"> kwiminyaka emininzi eyadlulayo eRussia endikukhumbulayo ukubhala phantsi, >
< start="1778.82" dur="4.08"> kwaye kwakusisiphumo sendlela eyahlukileyo yokuphila iimeko >
< start="1782.9" dur="5"> kuchaphazele ixesha elide okanye ixesha lokuphila kwezilwanyana ezahlukeneyo. >
< start="1789.11" dur="3.6"> Kwaye ke babeka ezinye izilwanyana kubomi obulula. >
< start="1792.71" dur="2.91"> kwaye babeka ezinye izilwanyana ubunzima ngakumbi >
< start="1795.62" dur="1.89"> kunye neemeko ezinzima. >
< start="1797.51" dur="2.87"> Kwaye izazinzulu zifumanise ukuba izilwanyana >
< start="1800.38" dur="2.22"> ebekwe etafileni >
< start="1802.6" dur="2.88"> kunye neemeko ezilula, iimeko, >
< start="1805.48" dur="4.73"> ezo meko zokuphila, eneneni zaba buthathaka. >
< start="1810.21" dur="4.41"> Ngenxa yokuba iimeko zazilula kakhulu, baba buthathaka >
< start="1814.62" dur="2.22"> kwaye uchaphazeleka ngakumbi kukugula. >
< start="1816.84" dur="5"> Kwaye abo babekwimeko entle babhubha kwangoko >
< start="1821.9" dur="2.418"> kunabo bavunyelwe ukuba babe namava >
< start="1824.318" dur="3.105"> ubunzima obuqhelekileyo bobomi. >
< start="1828.72" dur="1.163"> Ayinamdla? >
< start="1830.81" dur="2.2"> Kuyinyani ngezilwanyana ndiqinisekile kuyinyani >
< start="1833.01" dur="1.94"> isimilo sethu, ngokunjalo. >
< start="1834.95" dur="4.92"> Kwinkcubeko yaseNtshona ingakumbi kwihlabathi lanamhlanje, >
< start="1839.87" dur="3.38"> sibe nayo ngokulula ngeendlela ezininzi. >
< start="1843.25" dur="1.973"> Ukuphila ubomi obulula. >
< start="1846.94" dur="1.71"> Inombolo yeenjongo zikaThixo ebomini bakho >
< start="1848.65" dur="2.67"> kukwenzela ukuba ube njengoYesu Kristu kwisimo. >
< start="1851.32" dur="1.87"> Ukucinga njengoKristu, ukwenza njengoKristu, >
< start="1853.19" dur="3.94"> ukuba uphile njengoKristu, ukuthanda njengoKristu, >
< start="1857.13" dur="2.2"> ukuba nethemba njengoKristu. >
< start="1859.33" dur="3.62"> Kwaye ukuba iyinyani, kwaye iBhayibhile iyiphindaphinda le nto, >
< start="1862.95" dur="2.13"> ke uThixo uyakukuthatha ngezinto ezifanayo >
< start="1865.08" dur="4.304"> ukuba uYesu wadlula ukuze akhule ubuntu bakho. >
< start="1869.384" dur="2.786"> Uthi, kuhle, unjani uYesu? >
< start="1872.17" dur="3.8"> UYesu uluthando novuyo noxolo nomonde nobubele, >
< start="1875.97" dur="2.34"> isiqhamo soMoya, zonke ezo zinto. >
< start="1878.31" dur="1.4"> Kwaye uThixo uvelisa njani ezo zinto? >
< start="1879.71" dur="2.9"> Ngokusibeka kwimeko echaseneyo. >
< start="1882.61" dur="3.76"> Sifunda umonde xa silingwa ukuba singabi namonde. >
< start="1886.37" dur="3.37"> Sifunda uthando xa sibekwa ngabantu abangathandaniyo. >
< start="1889.74" dur="2.49"> Sifunda ulonwabo embindini wentlungu. >
< start="1892.23" dur="4.67"> Sifunda ukulinda kwaye sibe lolo hlobo lonyamezelo >
< start="1896.9" dur="1.56"> xa kufuneka silinde. >
< start="1898.46" dur="3.423"> Sifunda ububele xa silingwa ukuba sizingce. >
< start="1902.77" dur="3.66"> Kwiintsuku ezizayo, iya kuba nokuhenda >
< start="1906.43" dur="2.83"> Ukuzingela nje kwindawo engaphantsi, nokubuyela ngaphakathi, >
< start="1909.26" dur="2.54"> kwaye ndatsho, sizosikhathalela. >
< start="1911.8" dur="4.22"> Me, ngokwam, kwaye nam, usapho lwam, thina sobane kwaye akusekho >
< start="1916.02" dur="2.14"> ulibale ngumntu wonke. >
< start="1918.16" dur="2.62"> Kodwa loo nto iya kuwucekisa umphefumlo wakho. >
< start="1920.78" dur="2.51"> Ukuba uza kuqala ukucinga malunga nabanye abantu >
< start="1923.29" dur="3.254"> kunye nokunceda abo bahlelelekileyo, abantu abalupheleyo >
< start="1926.544" dur="4.026"> kunye nezo zinemeko yokubandulula, >
< start="1930.57" dur="3.47"> kwaye ukuba uya kufikelela, umphefumlo wakho uya kukhula, >
< start="1934.04" dur="3.34"> Intliziyo yakho iya kukhula, ube ngumntu olunge ngakumbi >
< start="1937.38" dur="5"> Ekupheleni kwale ngxaki kunakuqala, kulungile? >
< start="1943.52" dur="2.98"> Uyabona, Thixo, xa efuna ukwakha isimilo sakho, >
< start="1946.5" dur="1.37"> unokusebenzisa izinto ezimbini. >
< start="1947.87" dur="2.92"> Ungasebenzisa iLizwi lakhe, inyani iyasitshintsha, >
< start="1950.79" dur="3.56"> kwaye unokusebenzisa iimeko, ekunzima kakhulu. >
< start="1954.35" dur="4"> Ngoku, uThixo angathanda ukusebenzisa indlela yokuqala, uLizwi. >
< start="1958.35" dur="1.63"> Kodwa asisoloko siphulaphula eLizwini, >
< start="1959.98" dur="3.77"> ngoko usebenzisa iimeko ukufumana ingqalelo yethu. >
< start="1963.75" dur="4.6"> Kwaye kunzima ngakumbi, kodwa ihlala isebenza ngakumbi. >
< start="1968.35" dur="3.23"> Ngoku, uthi, kulungile, kulungile, Rick, ndiyayifumana, >
< start="1971.58" dur="4.22"> ukuba iingxaki ziyahluka kwaye zinenjongo, >
< start="1975.8" dur="3.18"> kwaye balapha ukuvavanya ukholo lwam, kwaye baya kuba >
< start="1978.98" dur="2.47"> Zonke iintlobo ezahlukileyo, kwaye azize xa ndifuna 'em. >
< start="1981.45" dur="4.393"> Kwaye uThixo angasebenzisa 'em ukukhulisa isimilo sam kunye nokuqina ubomi bam. >
< start="1986.95" dur="1.72"> Ke yintoni endimele ndiyenze? >
< start="1988.67" dur="4.94"> Kwiintsuku ezimbalwa ezizayo nakwiiveki kwaye mhlawumbi kwiinyanga ezizayo >
< start="1993.61" dur="3.75"> njengoko sijongana nale ngxaki yekoronavirus sisonke, >
< start="1997.36" dur="4.09"> Ndifanele ndiphendule njani ebomini bam? >
< start="2001.45" dur="1.98"> Kwaye andithethi nje ngentsholongwane. >
< start="2003.43" dur="2.747"> Ndithetha ngeengxaki eziza kuza njengesiphumo >
< start="2006.177" dur="5"> yokungabikho emsebenzini okanye abantwana ekhaya >
< start="2011.26" dur="3.12"> okanye zonke ezinye izinto eziphazamisayo ebomini >
< start="2014.38" dur="1.553"> njengoko iqhele ukwenzeka. >
< start="2017.04" dur="2.24"> Ndifanele ndiphendule njani kwiingxaki zobomi bam? >
< start="2019.28" dur="2.9"> Ewe, kwakhona, uYakobi ucacile. >
< start="2022.18" dur="3.39"> kwaye usinika ezintathu ezisebenzayo. >
< start="2025.57" dur="4.45"> ziimpendulo ezinkulu, kodwa ziimpendulo ezichanekileyo. >
< start="2030.02" dur="1.32"> Ngapha koko, xa ndikuxelela eyokuqala, >
< start="2031.34" dur="2.21"> uza kuya, kuya kufuneka undidlale. >
< start="2033.55" dur="3.07"> Kodwa zikho iimpendulo ezintathu, zonke ziqala nge-R. >
< start="2036.62" dur="2.76"> Impendulo yokuqala ayithethayo xa ukho >
< start="2039.38" dur="4.46"> Ukuhamba ngamaxesha anzima, vuya. >
< start="2043.84" dur="2.41"> Uyahamba, uyadlala? >
< start="2046.25" dur="1.73"> Oko kuvakala kusisithunzi. >
< start="2047.98" dur="2.29"> Anditsho ngovuyo ngale ngxaki. >
< start="2050.27" dur="1.69"> Ndilandele kule umzuzu nje. >
< start="2051.96" dur="3.54"> Utsho uyithathele ingqalelo njengento elungileyo. >
< start="2055.5" dur="2.69"> Phatha ezi ngxaki njengabahlobo. >
< start="2058.19" dur="1.78"> Ngoku, musa ukungaqondi kum. >
< start="2059.97" dur="3.14"> Akathethi fake. >
< start="2063.11" dur="3.57"> Akathethi nxiba incam yeplastiki, >
< start="2066.68" dur="2.33"> Yenza ngathi yonke into ilungile kwaye ayiyiyo, >
< start="2069.01" dur="1.36"> kuba akunjalo. >
< start="2070.37" dur="3.12"> IPollyanna, intombazana encinci ye-Orphan Annie, ilanga >
< start="2073.49" dur="3.512"> izakuphuma ngomso, isenokungaphumi ngomso. >
< start="2077.002" dur="3.568"> Akathethi ukukhanyela inyani, hayi kwaphela. >
< start="2080.57" dur="2.76"> Akathethi ukuba yimbonakalo. >
< start="2083.33" dur="2.87"> Owu nyana, ndiyaya ezintlungwini. >
< start="2086.2" dur="1.72"> UThixo uyithiyile intlungu njengawe. >
< start="2087.92" dur="2.1"> Owu, ndiyahlupheka, ngubani. >
< start="2090.02" dur="3.49"> Kwaye unale ngxaki yokufela ukholo, kwaye uyazi, >
< start="2093.51" dur="1.937"> Ndinalo mvakalelo yokomoya kuphela xa ndiziva kakubi. >
< start="2095.447" dur="2.983"> Hayi, hayi, hayi, uThixo akafuni ukuba ube ngumfeli-nkolo. >
< start="2098.43" dur="1.54"> UThixo akafuni ukuba ube nayo >
< start="2099.97" dur="3.453"> isimo sengqondo sokujonga intlungu. >
< start="2104.74" dur="2.5"> Uyazi, ndiyakhumbula ngexesha elinye endandidlula kulo >
< start="2107.24" dur="3.21"> ixesha elinzima ngokwenene kwaye umhlobo wayezama ukuba nobubele >
< start="2110.45" dur="2.307"> bathi, Uyazi wena Rick, hlaziyeka >
< start="2112.757" dur="1.86"> "kuba izinto zinokuba zimbi ngakumbi." >
< start="2115.61" dur="2.14"> Kwaye qikelela ukuba yintoni, baye baba mandundu. >
< start="2117.75" dur="2.23"> Oko kwakungekho luncedo konke konke. >
< start="2119.98" dur="2.225"> Ndaziva ndonwabile kwaye baye besiba krakra. >
< start="2123.31" dur="4.588"> Ke akukho malunga fake Pollyanna ukucinga olungileyo. >
< start="2127.898" dur="3.352"> Ukuba ndisebenza ngenzondelelo, ndiyakhuthala. >
< start="2131.25" dur="2.88"> Hayi, hayi, hayi, hayi, kuninzi, kunzulu kakhulu kunoko. >
< start="2134.13" dur="5"> Asonwabanga, simamele, asivuyiyo yingxaki. >
< start="2140.17" dur="5"> Siyavuya kwingxaki, ngelixa sikule ngxaki, >
< start="2145.71" dur="2.13"> zisekhona izinto ezininzi onokuvuya ngazo. >
< start="2147.84" dur="2.92"> Ayisiyo ingxaki ngokwayo, kodwa ezinye izinto >
< start="2150.76" dur="2.514"> ukuba singavuya malunga neengxaki. >
< start="2153.274" dur="2.836"> Kutheni sinokuba sonwabile kwanale ngxaki? >
< start="2156.11" dur="2.54"> Kuba Siyazi ukuba kukho injongo ngayo. >
< start="2158.65" dur="1.74"> Kuba siyazi ukuba uThixo akasayi kuze asishiye. >
< start="2160.39" dur="2.97"> Kuba sazi izinto ezininzi ezahlukeneyo. >
< start="2163.36" dur="1.81"> Siyazi ukuba uThixo unenjongo. >
< start="2165.17" dur="4.58"> Qaphela uthi uyithathele ingqalelo njengolonwabo olunyulu. >
< start="2169.75" dur="1.98"> Yenza isangqa kwigama liqwalasele. >
< start="2171.73" dur="4.8"> Cinga ngeendlela zokwenza umbono wakho ngabom. >
< start="2176.53" dur="2.22"> Unokulungiswa kwesimo sengqondo >
< start="2178.75" dur="1.71"> ukuba uza kwenza apha. >
< start="2180.46" dur="3.869"> Ngaba lukhetho lwakho ukuba ugcobe? >
< start="2184.329" dur="3.201"> Kwindumiso 34 ivesi yokuqala, utsho >
< start="2187.53" dur="3.69"> Ndiya kumbonga uYehova ngamaxesha onke, >
< start="2191.22" dur="1.39"> Ngalo lonke ixesha. >
< start="2192.61" dur="0.92"> Kwaye uthi ndiza. >
< start="2193.53" dur="2.48"> Kukhetho lomyolelo, isigqibo. >
< start="2196.01" dur="1.66"> Kukuzimisela, lukhetho. >
< start="2197.67" dur="4.08"> Ngoku, uza kudlula kwezi nyanga zizayo >
< start="2201.75" dur="2.4"> nokuba unesimo esihle okanye isimo sengqondo esibi. >
< start="2204.15" dur="2.7"> Ukuba isimo sakho sengqondo sibi, uya kuzenzela >
< start="2206.85" dur="2.35"> Kwaye wonke umntu okujikeleze usizi. >
< start="2209.2" dur="3.15"> Kodwa ukuba isimo sakho sengqondo silungile, lukhetho lwakho ukuba ungonwaba. >
< start="2212.35" dur="1.76"> Utsho, masijonge kwicala eliqaqambileyo. >
< start="2214.11" dur="3.09"> Masifumane izinto esinokumbulela ngazo uThixo. >
< start="2217.2" dur="2.15"> Kwaye masiqonde ukuba nokuba kubi, >
< start="2219.35" dur="2.88"> UThixo unokuzisa okuhle kokubi. >
< start="2222.23" dur="2.29"> Yenza uhlengahlengiso ngesimo sengqondo. >
< start="2224.52" dur="3.25"> Andizukuva krakra kule ngxaki. >
< start="2227.77" dur="3.23"> Ndiza kuba ngcono kule ngxaki. >
< start="2231" dur="4.39"> Ndiza kukhetha, lukhetho lwam lokuvuya. >
< start="2235.39" dur="3.41"> Kulungile, inombolo yesibini, yesibini R isicelo. >
< start="2238.8" dur="4.08"> Kwaye oko kukucela kuThixo ubulumko. >
< start="2242.88" dur="3.29"> Le nto ufuna ukuyenza nangaliphi na ixesha usengxakini. >
< start="2246.17" dur="2.39"> Ufuna ukwazi ubulumko kuThixo. >
< start="2248.56" dur="2.1"> Kwiveki ephelileyo, ukuba umamele umyalezo weveki ephelileyo, >
< start="2250.66" dur="2.72"> kwaye ukuba uyiphosile, buyela kwi-intanethi kwaye ubukele loo myalezo >
< start="2253.38" dur="5"> ukuyenza ukutyhutyha intili yentsholongwane ngaphandle koloyiko. >
< start="2260.09" dur="2.15"> Kukhetho lwakho ukuba ugcobe, >
< start="2262.24" dur="2.733"> kodwa ke ubuza kuThixo ubulumko. >
< start="2265.89" dur="2.13"> Kwaye ubuza kuThixo ubulumko kwaye uthandaze >
< start="2268.02" dur="1.51"> kwaye uthandazela malunga neengxaki zakho. >
< start="2269.53" dur="2.99"> Indinyana yesixhenxe iyatsho oku kuYakobi. >
< start="2272.52" dur="4.83"> Ukuba kule nkqubo akukho namnye kuwe ongazi ukuba uhlangana kanjani >
< start="2277.35" dur="4.05"> nayiphi na ingxaki, oku kuphumile kuguqulelo lwePhillips. >
< start="2281.4" dur="2.24"> Ukuba kwinkqubo akukho namnye kuni ongaziyo ukuba uhlangana njani >
< start="2283.64" dur="3.44"> nayiphi na ingxaki onayo kufuneka ucele kuThixo >
< start="2287.08" dur="2.65"> obapha ngesisa bonke abantu >
< start="2289.73" dur="2.6"> ngaphandle kokubenza bazive benetyala. >
< start="2292.33" dur="3.45"> Kwaye unokuqiniseka ukuba ubulumko obufunekayo >
< start="2295.78" dur="1.963"> uya kunikwa. >
< start="2298.65" dur="2.18"> Batsho ukuba kutheni kuzo zonke izinto ndizocela ubulumko >
< start="2300.83" dur="1.35"> phakathi kwengxaki? >
< start="2303.29" dur="2.07"> Ke ufunda kuyo. >
< start="2305.36" dur="1.57"> Ke ungafunda kwingxaki, >
< start="2306.93" dur="1.48"> Kungenxa yoko le nto ucela ubulumko. >
< start="2308.41" dur="4.26"> Kuluncedo ngakumbi ukuba uyeka ukubuza ukuba kutheni, >
< start="2312.67" dur="3.04"> kutheni lento isenzeka, kwaye uqale ngokubuza, >
< start="2315.71" dur="1.45"> ufuna ndifunde ntoni? >
< start="2318.09" dur="1.92"> Ufuna ukuba ndiyintoni? >
< start="2320.01" dur="2.27"> Ndingakhula njani kule nto? >
< start="2322.28" dur="2.17"> Ndingaba ngumfazi olunge njani? >
< start="2324.45" dur="4.51"> Ndingaba yindoda engcono njani kule ngxaki? >
< start="2328.96" dur="1.32"> Ewe, ndiyavavanywa. >
< start="2330.28" dur="1.53"> Andinaxhala lokuba kutheni. >
< start="2331.81" dur="1.71"> Kutheni engabalulekanga nganto. >
< start="2333.52" dur="3.77"> Yintoni ebalulekileyo yintoni, ndiza kuba yintoni, >
< start="2337.29" dur="3.7"> kwaye ndiza kufunda ntoni kule meko? >
< start="2340.99" dur="2.71"> Kwaye ukuze wenze oko, kuya kufuneka ucele ubulumko. >
< start="2343.7" dur="2.56"> Ke uthi, xa ufuna ubulumko, buza kuThixo, >
< start="2346.26" dur="1.61"> UThixo uza kukunika. >
< start="2347.87" dur="2.2"> Utsho ke wena, Thixo, ndifuna ubulumko njengomama. >
< start="2350.07" dur="3.23"> Abantwana bam baya kuba sekhaya kwinyanga ezayo. >
< start="2353.3" dur="2.22"> Ndidinga ubulumko njengotata. >
< start="2355.52" dur="3.48"> Ndikhokela njani xa imisebenzi yethu isemngciphekweni >
< start="2359" dur="1.553"> kwaye andikwazi ukusebenza ngoku? >
< start="2362.05" dur="1.45"> Cela ubulumko kuThixo. >
< start="2363.5" dur="1.84"> Sukubuza ukuba kutheni, kodwa buza ntoni. >
< start="2365.34" dur="2.99"> Ke okokuqala uyavuya, ufumana isimo sengqondo esifanelekileyo >
< start="2368.33" dur="3.14"> Ngokuthi ndiza kubulela uThixo ngengxaki, >
< start="2371.47" dur="3.14"> kodwa ndiza kubulela uThixo kwingxaki. >
< start="2374.61" dur="2.92"> Kuba ilungile kaThixo nokuba ubomi buncancile. >
< start="2377.53" dur="2.137"> Kungenxa yoko le nto ndibiza olu chungechunge >
< start="2379.667" dur="5"> "Ukholo lokwenyani olusebenzayo xa uBomi bungasebenzi." >
< start="2385.41" dur="1.473"> Xa ubomi bungasebenzi. >
< start="2387.96" dur="1.69"> Ke ndiyavuya, ndiyacela. >
< start="2389.65" dur="4.32"> Into yesithathu uJames athi ayenze kukuphumla. >
< start="2393.97" dur="4.83"> Ewe, kinda uphume ngaphandle, ungazifumani >
< start="2398.8" dur="3.86"> Yonke imfumba yeemvakalelo. >
< start="2402.66" dur="2.64"> Sukucinezeleka kakhulu ngaphandle kokuba awunakwenza nto. >
< start="2405.3" dur="1.33"> Sukuba nexhala malunga nekamva. >
< start="2406.63" dur="2.83"> UThixo uthi ndizokukhathalela, undithembe. >
< start="2409.46" dur="2.42"> Uyamthemba uThixo ukuba wazi okona kulungileyo. >
< start="2411.88" dur="2.17"> Uyabambisana naye. >
< start="2414.05" dur="4.84"> Awukhe uyijikeleze imeko ophila kuyo. >
< start="2418.89" dur="3.07"> Kodwa uthi nje, Thixo, ndiza kuphumla. >
< start="2421.96" dur="2.28"> Andizukuthandabuza. >
< start="2424.24" dur="1.87"> Andizukuthandabuza. >
< start="2426.11" dur="2.76"> Ndiza kukuthemba kule meko. >
< start="2428.87" dur="3.15"> Ivesi yesibhozo yivesi yokugqibela esiya kujonga kuyo. >
< start="2432.02" dur="1.26"> Ewe, siza kujonga enye ngomzuzu. >
< start="2433.28" dur="5"> Kodwa ivesi yesibhozo ithi, kodwa kufuneka ucele ngokunyaniseka >
< start="2438.9" dur="2.49"> ngaphandle kwamathandabuzo emfihlo. >
< start="2441.39" dur="1.86"> Yintoni oyifunayo kukholo olunyulu? >
< start="2443.25" dur="1.57"> Cela ubulumko. >
< start="2444.82" dur="2.07"> Kwaye uthi, Thixo, ndifuna ubulumko, kwaye ndiyabulela >
< start="2446.89" dur="1.26"> Uya kundinika ubulumko. >
< start="2448.15" dur="2.89"> Ndiyabulela, undinika ubulumko. >
< start="2451.04" dur="3.06"> Sukukhubeka, ungathandabuzi, >
< start="2454.1" dur="2.57"> kodwa yikhuphe kuThixo. >
< start="2456.67" dur="5"> Uyazi, iBhayibhile iyatsho, ngaphambili xa ndatshoyo >
< start="2461.67" dur="3.24"> ukuba uthethe ezi ntlobo ezininzi zeengxaki. >
< start="2464.91" dur="1.8"> Uyazi, sithetha ngohlobo olwahlukileyo, >
< start="2466.71" dur="2.23"> ezininzi, ezininzi iintlobo zeengxaki. >
< start="2468.94" dur="2.81"> Elo gama ngesiGrike, iintlobo ezininzi zeengxaki, >
< start="2471.75" dur="3.11"> likwigama elinye elichaziweyo kuPetros wokuQala >
< start="2474.86" dur="1.97"> Isahluko sesine, ivesi yesine eyathi >
< start="2476.83" dur="4.11"> UThixo uneentlobo ezininzi zobabalo anokunika lona. >
< start="2480.94" dur="3.35"> Iindidi ezininzi zenceba. >
< start="2484.29" dur="5"> Kuyinto efanayo enemibala eyahlukeneyo, eyahlukeneyo, efana nedayimane. >
< start="2489.339" dur="1.694"> Uthini yena apho? >
< start="2492.28" dur="2.08"> Kuyo yonke ingxaki onayo, >
< start="2494.36" dur="2.87"> kukho ubabalo oluvela kuThixo olufumanekayo. >
< start="2497.23" dur="5"> Ngazo zonke iintlobo ezininzi zezilingo kunye nembandezelo >
< start="2502.74" dur="4.5"> kunye nobunzima, kukho uhlobo lwesisa nenceba >
< start="2507.24" dur="2.25"> Amandla afuna ukuwanikwa nguThixo >
< start="2509.49" dur="2.05"> ukuthelekisa ingxaki ethile. >
< start="2511.54" dur="2.04"> Udinga ubabalo koku, udinga ubabalo ngenxa yoko, >
< start="2513.58" dur="1"> udinga ubabalo koku. >
< start="2514.58" dur="3.76"> U-Thixo uthi ubabalo lwam lubanzi >
< start="2518.34" dur="1.99"> njengeengxaki ojamelene nazo. >
< start="2520.33" dur="1.27"> Ke ndithini? >
< start="2521.6" dur="1.74"> Nditsho ukuba zonke iingxaki ezikhoyo ebomini bakho, >
< start="2523.34" dur="2.44"> kubandakanya le ngxaki yeCOVID, >
< start="2525.78" dur="4.03"> usathana uthetha ukohlula ngezi ngxaki. >
< start="2529.81" dur="4.41"> Kodwa uThixo kuthetha ukukukhulisa kwezi ngxaki. >
< start="2534.22" dur="3.543"> Ufuna ukohlula, Sathana, kodwa uThixo ufuna ukukuphuhlisa. >
< start="2539.44" dur="2.12"> Ngoku, iingxaki eziza ebomini bakho >
< start="2541.56" dur="3.34"> sukuzenzela umntu ongcono. >
< start="2544.9" dur="2.51"> Uninzi lwabantu lube ngabantu abukrakra abasuka kum. >
< start="2547.41" dur="3.28"> Ayizenzi ngokuzenzekelayo ungumntu obhetele. >
< start="2550.69" dur="2.96"> Sisimo sakho sengqondo esenza umahluko. >
< start="2553.65" dur="2.86"> Kwaye kulapho ndifuna ukukupha enye into ekufuneka uyikhumbule. >
< start="2556.51" dur="3.07"> Inani lesine, into yesine ekufuneka uyikhumbule >
< start="2559.58" dur="3.75"> xa ujongene neengxaki kukhumbula >
< start="2563.33" dur="1.99"> Izithembiso zikaThixo. >
< start="2565.32" dur="1.84"> Khumbula izithembiso zikaThixo. >
< start="2567.16" dur="1.28"> Oko kuphantsi kwivesi ye-12. >
< start="2568.44" dur="1.52"> Makhe ndikufundele esi sithembiso. >
< start="2569.96" dur="2.363"> Isahluko sokuqala, iivesi 12. >
< start="2573.55" dur="5"> Unoyolo umntu onyamezelayo Ngaphantsi kwesilingo, >
< start="2579.84" dur="2.67"> kuba xa uthe walulinda uvavanyo, >
< start="2582.51" dur="5"> Uya kufumana isithsaba sobomi esithembiswe nguThixo, >
< start="2587.82" dur="2.75"> kukho izwi, kwabo bamthandayo. >
< start="2590.57" dur="0.833"> Makhe ndiyifunde kwakhona. >
< start="2591.403" dur="2.057"> Ndifuna ukuba umamele ngenyameko kakhulu. >
< start="2593.46" dur="5"> Unoyolo umntu onyamezelayo Ngaphantsi kwesilingo, >
< start="2598.84" dur="3.36"> Ngubani ojongana nobunzima, >
< start="2602.2" dur="2.12"> njengemeko sikuyo ngoku. >
< start="2604.32" dur="3.67"> Unoyolo umntu onyamezelayo, lowo unyamezelayo, >
< start="2607.99" dur="3.87"> okholose kuThixo, okholelwa kuye, >
< start="2611.86" dur="3.12"> kuba xa sele emile uvavanyo, phuma >
< start="2614.98" dur="2.72"> kwicala elingasemva, eli lingo alizukugqibela. >
< start="2617.7" dur="1.4"> Kukho ukuphela kwayo. >
< start="2619.1" dur="2.07"> Uya kuphuma kwelinye icala lomjelo. >
< start="2621.17" dur="4.41"> Uya kufumana isithsaba sobomi. >
< start="2625.58" dur="3.38"> Ewe, andizazi zonke ukuba kuthetha ntoni, kodwa kulungile. >
< start="2628.96" dur="2.7"> Isithsaba sobomi esithembiswe nguThixo >
< start="2631.66" dur="2.373"> kwabo bamthandayo. >
< start="2635.73" dur="2.32"> Kukhetho lwakho ukuba wonwabe. >
< start="2638.05" dur="2.92"> Kukhetho lwakho ukuthemba ubulumko bukaThixo >
< start="2640.97" dur="1.72"> endaweni yokuthandabuza. >
< start="2642.69" dur="4.21"> Cela kuThixo ubulumko bokukunceda kwimeko okuyo. >
< start="2646.9" dur="3.23"> Kwaye ke cela ukholo kuThixo ukuze unyamezele. >
< start="2650.13" dur="2.27"> Kwaye uthi, Thixo, andizukuncama. >
< start="2652.4" dur="1.793"> Nale iza kudlula. >
< start="2655.329" dur="2.111"> Umntu othile wake wabuzwa, yeyiphi oyithandayo >
< start="2657.44" dur="0.833"> Indinyana yeBhayibhile? >
< start="2658.273" dur="1.297"> Yathi, kwenzeka. >
< start="2659.57" dur="1.273"> Ke kutheni uyithanda loo ndinyana? >
< start="2660.843" dur="2.687"> Kuba xa kuvela iingxaki, ndiyazi ukuba azizelanga kuhlala. >
< start="2663.53" dur="1.194"> Zenzeka. >
< start="2665.84" dur="2.88"> Kwaye kuyinyani kule meko ethile. >
< start="2668.72" dur="3.983"> Ayizukuhlala, izakwenzeka. >
< start="2673.56" dur="2.24"> Ngoku, ndifuna ukusondela kule ngcinga. >
< start="2675.8" dur="3.77"> Ingxaki ayenzi zngxaki kwaphela. >
< start="2679.57" dur="3.23"> Ihlala izityhila, ihlala izityhila. >
< start="2682.8" dur="4.563"> Le ngxaki inokubhengeza ezinye iindlela zokuqhawula umtshato emtshatweni wakho. >
< start="2688.77" dur="2.76"> Le ntlekele inokubhengeza ezinye iindlela zokusilela >
< start="2691.53" dur="1.823"> kulwalamano lwakho noThixo. >
< start="2694.26" dur="5"> Le ntlekele inokuveza ezinye iindlela zokuziphatha, >
< start="2699.29" dur="2.593"> ukuba indlela uzityhalela ngamandla. >
< start="2702.949" dur="3.181"> Kwaye ke zimisele ukuvumela uThixo ukuba athethe nawe >
< start="2706.13" dur="5"> malunga nezinto ezifuna ukutshintsha kubomi bakho, kulungile? >
< start="2711.45" dur="1.7"> Ndifuna ukuba ucinge ngale veki, >
< start="2713.15" dur="3.44"> kwaye mandikunike amanye amanyathelo afanelekileyo, kulungile? >
< start="2716.59" dur="2.47"> Amanyathelo anokusebenza, inombolo yokuqala, ndifuna wena >
< start="2719.06" dur="5"> ukukhuthaza omnye umntu ukuba amamele lo myalezo. >
< start="2724.55" dur="1.25"> Ngaba uza kuyenza loo nto? >
< start="2725.8" dur="3.603"> Ngaba uza kudlulisa eli khonkco kwaye ulithumele kumhlobo? >
< start="2729.403" dur="3.337"> Ukuba oku kuyakhuthaza, wugqithisele, >
< start="2732.74" dur="2.3"> kwaye ube ngumkhuthazi kule veki. >
< start="2735.04" dur="4.84"> Wonke umntu okujikelezileyo ufuna ukhuthazo ngeli xesha lentlekele. >
< start="2739.88" dur="1.779"> Ke thumela 'ikhonkco. >
< start="2741.659" dur="5"> Iiveki ezimbini ezidlulileyo xa sasinecawe kwizifundo zethu, >
< start="2747.52" dur="3.11"> kwihlathi iLake kunye nazo zonke ezinye iikhampasi zethu zeSaddleback, >
< start="2750.63" dur="3.53"> bamalunga ne-30, 000 abantu ababekho ecaweni. >
< start="2754.16" dur="4.14"> Kodwa kule veki iphelileyo xa bekufuneka sigqibe iinkonzo >
< start="2758.3" dur="1.87"> kwaye sonke kufuneka sibukele kwi-intanethi, ndatsho, >
< start="2760.17" dur="3.38"> wonke umntu uye kwiqela lakho elincinci kwaye umeme abamelwane bakho >
< start="2763.55" dur="2.94"> Mema nabahlobo bakho kwiqela lakho elincinci, >
< start="2766.49" dur="0.95"> sasine-181,000 >
< start="2767.44" dur="5"> Ii-ISPs zamakhaya ethu zixhunyiwe kwinkonzo. >
< start="2776.3" dur="3.41"> Oko kuthetha ukuba mhlawumbi isiqingatha sesigidi sabantu >
< start="2779.71" dur="1.96"> ubukele umyalezo weveki ephelileyo. >
< start="2781.67" dur="3.04"> Isiqingatha sesigidi okanye ngaphezulu. >
< start="2784.71" dur="3.63"> Kutheni, ngoba uxelele omnye umntu ukuba abukele. >
< start="2788.34" dur="4.56"> Kwaye ndifuna ukukhuthaza ukuba ube lingqina leendaba ezilungileyo >
< start="2792.9" dur="2.79"> Kule veki kwilizwe elizidinga iindaba ezilungileyo. >
< start="2795.69" dur="1.4"> Abantu kufuneka beve le. >
< start="2797.09" dur="1.18"> Thumela ikhonkco. >
< start="2798.27" dur="5"> Ndiyakholelwa ukuba singabakhuthaza abantu abasisigidi kule veki >
< start="2803.29" dur="3.8"> ukuba sonke singadlula kumyalezo, kulungile? >
< start="2807.09" dur="3.16"> Inani lesibini, ukuba ukwiliqela elincinci, asizukungena >
< start="2810.25" dur="3.45"> ukwazi ukudibana, ubuncinci kule nyanga, ngokuqinisekileyo. >
< start="2813.7" dur="3.95"> Kwaye ke ndingakukhuthaza ukuba usete intlanganiso ebonakalayo. >
< start="2817.65" dur="1.79"> Unokuba neqela elikwi-intanethi. >
< start="2819.44" dur="0.97"> Uyenza njani loo nto? >
< start="2820.41" dur="2.63"> Ewe, kukho iimveliso phaya ngaphandle njengeZoom. >
< start="2823.04" dur="2.52"> Ufuna ukukhangela ukuba, Sondeza, simahla. >
< start="2825.56" dur="2.56"> Kwaye ungangena apho kwaye uxelele wonke umntu ukuba afumane i-Zoom >
< start="2828.12" dur="1.74"> kwifowuni yabo okanye kwikhompyuter yabo, >
< start="2829.86" dur="3.58"> kwaye uyakwazi ukudibanisa abantu abathandathu okanye abasibhozo okanye abalishumi, >
< start="2833.44" dur="3.15"> kwaye unokuba neqela lakho kule veki kwi-Zoom. >
< start="2836.59" dur="3.19"> Kwaye niyakwazi ukubonana ubuso ngobuso, njenge-Facebook Live, >
< start="2839.78" dur="2.933"> okanye kufana nabanye, uyazi, >
< start="2844.84" dur="5"> yintoni kwi-iPhone xa ujonga iFaceTime. >
< start="2850.12" dur="1.82"> Ewe, awukwazi ukwenza oko ngeqela elikhulu, >
< start="2851.94" dur="2.39"> kodwa ungayenza nomntu omnye. >
< start="2854.33" dur="3.52"> Kwaye ke khuthazanani ubuso ngobuso ngetekhnoloji. >
< start="2857.85" dur="2.66"> Ngoku sinetekhnoloji ebingafumaneki. >
< start="2860.51" dur="3.59"> Ke jonga Zoom kwiqela elincinci elibonakalayo. >
< start="2864.1" dur="1.17"> Kwaye eneneni apha kwi-Intanethi >
< start="2865.27" dur="1.85"> Unokufumana ulwazi, nalo. >
< start="2867.12" dur="3.244"> Inani lesithathu, ukuba awukho kwiqela elincinci, >
< start="2870.364" dur="4.096"> Ndiza kukunceda ungene kwiqela elikwi-intanethi kule veki, ndiya. >
< start="2874.46" dur="2.33"> Konke okufuneka ukwenze kukuthumela i-imeyile, >
< start="2880.015" dur="4.815"> UmfundisiRick @ ulusizi, igama elinye, SADDLEBACK, >
< start="2884.83" dur="2.81"> i-sisdleback.com, kwaye ndiza kukudibanisa >
< start="2887.64" dur="2.57"> kwiqela elikwi-intanethi, kulungile? >
< start="2890.21" dur="2.79"> Emva koko qiniseka ukuba uyinxalenye yeCawa yaseSaddleback >
< start="2893" dur="2.84"> ukufunda incwadana yakho yemihla ngemihla endiyithumelayo >
< start="2895.84" dur="2.03"> yonke imihla ngeli xesha lobunzima. >
< start="2897.87" dur="2.1"> Ibizwa ngokuba yi "Saddleback ekhaya." >
< start="2899.97" dur="3.5"> Inazo iingcebiso, inemiyalezo ekhuthazayo, >
< start="2903.47" dur="2.14"> zineendaba onokuzisebenzisa. >
< start="2905.61" dur="1.56"> Into esebenzayo kakhulu. >
< start="2907.17" dur="2.17"> Sifuna ukuhlala sinxibelelana nawe yonke imihla. >
< start="2909.34" dur="1.32"> Fumana "i-Saddleback ekhaya." >
< start="2910.66" dur="2.69"> Ukuba andinayo idilesi ye-imeyile, >
< start="2913.35" dur="1.42"> ke awuyifumani. >
< start="2914.77" dur="2.46"> Kwaye ungandithumela nge-imeyile idilesi ye-imeyile >
< start="2917.23" dur="4.41"> ukuya ku-PrinceRick@saddleback.com, kwaye ndiza kukubeka kuluhlu, >
< start="2921.64" dur="2.37"> kwaye uza kufumana unxibelelwano lwemihla ngemihla, >
< start="2924.01" dur="3.76"> incwadana yemihla ngemihla "Saddleback eKhaya". >
< start="2927.77" dur="2.09"> Ndifuna nje ukusondela ngaphambi kokuba ndithandaze >
< start="2929.86" dur="2.15"> Ngokuphinda utsho ukuba ndikuthanda kangakanani. >
< start="2932.01" dur="1.72"> Bendihlala ndikuthandazela yonke imihla, >
< start="2933.73" dur="1.9"> kwaye ndiza kuqhubeka ndikuthandazela. >
< start="2935.63" dur="2.68"> Siza kuyifumana ngoku kunye. >
< start="2938.31" dur="2.33"> Esi ayisosiphelo sebali. >
< start="2940.64" dur="3.4"> UThixo usetroneni yakhe, kwaye uThixo uza kuyisebenzisa >
< start="2944.04" dur="4.16"> ukukhulisa ukholo lwakho, ukuzisa abantu elukholweni. >
< start="2948.2" dur="1.8"> Ngubani owaziyo ukuba kwenzeka ntoni? >
< start="2950" dur="3.07"> Singalufumana ukuvuselelwa ngokomoya kuyo yonke le nto >
< start="2953.07" dur="2.66"> kuba abantu bahlala bebuyela kuThixo >
< start="2955.73" dur="1.87"> xa badlula kumaxesha anzima. >
< start="2957.6" dur="1.09"> Makhe ndikuthandazele. >
< start="2958.69" dur="1.66"> Bawo, ndifuna ukubulela wonke umntu >
< start="2960.35" dur="1.48"> Mamela ngubani ngoku. >
< start="2961.83" dur="5"> Ngamana singawuphila umyalezo kaYakobi wokuqala, >
< start="2967.39" dur="2.78"> iivesi zokuqala ezintandathu okanye ezisixhenxe. >
< start="2970.17" dur="4.25"> Kwanga singafunda ukuba iingxaki ziyeza, ziyakwenzeka, >
< start="2974.42" dur="5"> ziyahluka, zinenjongo, kwaye uya kuthi >
< start="2979.81" dur="2.41"> sizisebenzise zilungile ebomini bethu ukuba siyakuthembela. >
< start="2982.22" dur="1.49"> Sincede singathandabuzi. >
< start="2983.71" dur="4"> Sincede ukuba sonwabe, sicela, >
< start="2987.71" dur="3.53"> kunye nokukhumbula izithembiso zakho. >
< start="2991.24" dur="3.45"> Kwaye ndithandazela wonke umntu ukuba babe neveki esempilweni. >
< start="2994.69" dur="2.87"> Ngegama likaYesu, amen. >
< start="2997.56" dur="1.07"> UThixo akusikelele, wonke umntu. >
< start="2998.63" dur="1.823"> Dlulisela komnye umntu. >